Hevitra: very any amin'ny sampany i Debian | Avy amin'ny Linux
Ity lahatsoratra ity dia nalefan'i Rubén González tamin'ny alàlan'ny mailaka, noho izany tsy anjarako izany, fa izaho irery no manome azy sitraka amin'ny famoahana azy
Ity no lahatsoratro voalohany amin'ny DesdeLinux, ary tiako ny manomboka manao zavatra tsy mahazatra eto amin'izao tontolo izao GNU / Linux: mitaky ny fizarana anao manokana. Azoko atao ny miresaka momba ny fizarana hafa izay vao mainka niharatsy (matotra isika, amin'ny taona 2014 isika ary misy fizarana izay tsy hanomboka akory), fa inona no ho azoko amin'izany afa-tsy ny adihevitra be?
Aleoko miresaka momba ny fizarana izay hanohizako hampiasaina amin'ny fanantenana fa hahatratra sy hanatona ireo mpamorona Debian ny fiarahamonina; azo inoana fa tsy hitranga izany, saingy tsy afaka mipetraka milamina aho ary mitelina fanapahan-kevitra izay toa tsy mety amiko.
Ny modely Debian dia foana (na saika, misy olona amin'ny zava-drehetra) dia noderaina: mizara telo ny rantsany asa, miorina, mandram-potoana ary tsy milamina, ary mamela ny mpampiasa hisafidy arakaraka ny raikipohy fa ny aoriana any aoriana, ny vitsy kokoa lesoka hananan'ny rafitra, fa hisy ihany koa ny fampiharana taloha.
Miaraka amin'ireo sampana amin'ny fitsapana ary tsy milamina Debian manadio ny kinova miorina manaraka izy, manitsy ny lesoka notaterin'ireo mpampiasa azy. Heveriko fa mendrika hajaina ity: Red Hat y SOISA Tsy manana ahiahy amin'ny famoronana fizarana fanandramana izy ireo ary ny fananana ny "fiarahamonina" sy ny "loharanom-baovao" manamboatra ny fizarana ara-barotra. Nampiditra azy tao amin'ny rafitr'izy io i Debian ary nampitandrina ny momba an'io.
Ireo rantsana telo ireo dia misy miaraka amina antso fanandramana iray hafa, izay tsy hitako mazava tsara ny fisiany, saingy toa tetezana mankany amin'ireo rindranasa izay havaozina tsy tapaka izy io mba hahafahana mametraka ao amin'ny sampana ambany kokoa noho ilay tsy milamina. Ohatra, hitako io tamin'ny Audacious, izay ahafahan'ny kinova vaovao idirana avy amin'ny rafitra fitsapana satria mitovy ny fiankinan-doha. Xfce 4.10 dia andrana ihany koa nandritra ny fotoana vitsivitsy talohan'izay sy nandritra ny hatsiaka nataon'i Wheezy.
Izahay dia efa manana sampana efatra. Ho an'ny kinova Wheezy ny ekipa Debian Nanapa-kevitra izy ampidiro ao amin'ny tahiry ofisialy ny seranam-piaramanidina. Ireo fonosana avy any amin'ny seranam-piaramanidina dia mandeha tsara avokoa, saingy tsy izany foana no izy. Ohatra, tsy manana afa-tsy solosaina aho, solosaina finday misy teknolojia NVidia Optimus, ary misy fanavaozana kernel 3.13 sy 3.14 dia tsy mandeha ireo mpamily NVidia tompona (napetraka avy amin'ny repository ofisialy Debian). Fahadisoana sahady nitatitra ary toa voavaha, saingy mbola izany ihany manan-kery.
Mampihomehy, ny mandeha ratsy dia tsara kokoa noho ny nouveau mamela ny kernel hikirakira sary roa (tsy haiko raha fihemoran'ny kernel na olan'ny Debian amin'ilay kernel vaovao, fa talohan'ny 3.13 dia milamina ny zavatra). Ary tsy fantatry Debian Jessie ny karatra misy tariby misy ahy, noho izany dia tsy afa-mihetsika aho amin'ity hadisoana ity
Ny olana dia mety tonga amin'ny alàlan'ny fikirakirana ireo seranam-piaramanidina: tsy ny mpamorona Debian ofisialy foana no manao ny seranam-piaramanidina, fa ho an'ny fonosana tsy dia manandanja loatra dia ny antoko fahatelo izay, miaraka amin'ny fanampian'ny mpanohana izay mizaha ny fonosana, mampakatra ny atiny vaovao amin'ny ny trano fitahirizana. Midika izany fa tsy mpamorona ofisialy izay tompon'andraikitra amin'ny lesoka any amin'ny seranam-piaramanidina, ary noho izany indraindray dia tsy fahampian'ny fifehezana izany.
Ohatra, ny VLC any amin'ny seranam-piaramanidina dia manana olana miankina amin'ny fiankinan-doha hatramin'ny volana feb. Sy izaho nahemotra. Fa iza no hamaha izany? Tsy misy olona amin'izao fotoana izao: ny mpihazona VLC dia tsy miditra amin'ireo lisitra fandefasana hafatra ary tsy azoko antoka fa ny mpampiasa nandefa ny fonosana na ny mpanohana azy.
Misy olana mampidi-doza kokoa amin'ity dingana ity: tsy manana fanavaozana ny fiarovana ny seranam-piaramanidina, satria tsy ao anatin'ny sampana izay manara-maso ny ekipa fiarovana Debian. Topazo maso ny ohatra nasehon'i Qemu: izany Ny fahasamihafana eo amin'ny rafitra efa ho roa volana lasa izay dia voavaha tany amin'ny sampana Debian lehibe rehetra, saingy ao amin'ny changelog ny fonosana any amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy misy resaka fiovana mandritra ny telo volana (raha ny marina dia tsy nisy izany: nanana izany fonosana izany aho fa tsy izy. nohavaozina mandra-panapahako hevitra ny hamongotra azy io andro vitsy lasa izay).
Izany koa dia nitranga tamin'ny, ny sain'ny, ny voam. Raha ny marina dia manolotra kernel 3.12 i Debian raha tsy mampiseho ny fanavaozana ny fiarovana ny changelog izany hadisoana. Miditra amin'ny teboka sarotra isika eto: Debian dia manolotra fonosana mety hampidi-doza ao amin'ny toerana anaovany azy ofisialy ary satria loharanom-baovao malalaka izy io, navoaka tao amin'ny tambajotra ihany koa ny fahalemeny. Debian no resahina fa tsy distro volo antonony.
Izany dia tsy maintsy ampiana fa ny seranam-piaramanidina dia tsy havaozina amin'ny fomba mahazatra. Ny azo atao dia ny manao pin-apning miaraka amin'ireo fonosana napetraka avy any amin'ny seranam-piaramanidina na milaza izany amin'ny tanana fa te hanavao ireo fonosana ireo avy any amin'ny seranam-piaramanidina ianao, mametraka tsirairay ny fonosana tsirairay (na ireo tianao na ireo fiankinan-doha vaovao ... raha ianao fantaro izy ireo). Fomba iray hafa ny fanaovana fisie preferences miaraka amin'ireo fonosana rehetra manondro mivantana ireo seranam-piaramanidina. Na izany aza tsy safidy tsara. Ary ny Wiki Nampanantena i Debian fa hanazava ny raharaha, saingy tsy hitako ny valiny ...
Miaraka amin'ny backports dia misy sampana dimy. Mbola misy hafa koa. Mbola misy ihany ny taloha, izay efa lts (fanohanana maharitra), fa mitandrema: ny fonosana lts dia manaraka rafitra mitovy amin'ny seranam-piaramanidina, indraindray antoko fahatelo izay mikarakara azy ireo fa tsy mpamorona miasa milamina, amin'ny fitsapana ary tsy milamina. Ary misy koa ny backports ho an'ny oldstable. Mbola misy sampana telo hafa ho an'ny valo.
Eny, amin'ny fahatongavan'i Debian Jessie amin'ny taona ho avy dia hahatratra 10 ny isan'i Debian !!! sampana. Amin'ny teôria dia izy ireo no ho toeram-pivarotana ofisialy: manery, manery-backports, mametaka lts, ​​oldstable (Wheezy), backstable-backports, stable (Jessie), stable-backports, fitsapana, tsy milamina ary andrana. Ary eto no eritreretiko fa nandalo: Debian dia te-ho rafitra manerantany ary manohana maritrano iraika ambin'ny folo (ireo izay miseho amin'ny Distrowatch: amd64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, powerpc ary s390x, plus hurd-i386, kfreebsd - i386 sy kfreebsd-amd64), alaivo sary an-tsaina hoe ahoana no tokony hataon'ny mpamorona fitazonana fonosana amin'ny sampana telo na enina sy maritrano iraika ambin'ny folo.
Adala rehefa manana fonosana maherin'ny 20000 (efa misintona 30000) ao amin'ireo trano fitahirizanao izay tsy maintsy miara-miasa. Ary tsy azo atao ny manatratra vokatra tsara voadilo tahaka ny tamin'ny fotoana vitsy kokoa ny sampana ofisialy. Raha tsy nandeha lavitra intsony aho, dia nanana olana maromaro niaraka tamin'i Xfce tao Wheezy, rehefa naneho hevitra tamin'ny teny Anglisy mahatsiravina ahy aho eto, raha tsy nanome ahy olana i Squeeze tao anatin'ny fotoana fohy nampiasako azy (marina fa i Squeeze dia tsy niaritra ny vanim-potoanan'ny paradigma birao vaovao ...).
Izy io koa dia manampy ny mpamorona ho leo bebe kokoa amin'ny olana: efa nitatitra bug momba ny folo aho hatreto ary nandalo ahy toy ny… in-folo. Angamba ny tena nahasosotra indrindra dia ny nanapa-kevitra ny ekipa mpiaro ny laharam-pahamehana ny sampana fanandramana ary nanala ny fanohanan'ny gstreamer avy amin'ny sampana miorina. Hatramin'izao dia tsy afaka milalao horonan-tsary amin'ny html5 ao Iceweasel aho, manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso, noho ny fanavaozana ny fiarovana izay tsy misy ifandraisany amin'ny gstreamer. Ary niverina avy tany izy ireo ahy, amin'ny lalao avo roa heny.
Ary eto aho. Tsy tokony hangataka zavatra amin'i Debian aho, fa hanoro hevitra an'ity torohevitra ity: tsy afaka mandeha lavitra ianao. Te ho lasa rafitra manerantany ianao: okay, tazomy arakaraka ny arafitra marobe araka izay tratranao, fa esory ny sampana amin'izay. Raha te hifaninana amin'ny fizarana lavitra ianao dia aza mamoaka famoahana maharitra isaky ny roa taona, fa isaky ny efa-taona. Ary iza no maniry fampiharana vaovao sy Debian, hametraka ny sampana amin'ny fanandramana.
Saingy, efa nilaza aho fa tsy isan'andro isan'andro amin'ny Debian, ary tsy miara-miasa am-pahavitrihana, ka heveriko fa tsy afaka milaza ny hevitro aho.
PS: Tsy mihambo ho fizarana fahazoan-dàlana hivoahana aho; Misisika aho, ho ahy dia i Debian no tsara indrindra, mieritreritra aho fa ampy ny nolazaiko. Hanohy hampiasa ny GNU / Linux aho mandra-pahatohanan'ny FreeBSD ny NVidia Optimus, raha toa ka misy izany. Ho hitantsika eo raha hitsangatsangana haingana ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Hevitra: Very any amin'ireo rantsany i Debian
179 hevitra, avelao ny anao
Rehefa afaka 10 taona nampiasana an'i Debian ho Distro lehibe aho dia mandeha indray andro ary mametraka an'i Fedora, aorian'ny herinandro tsara, herinandro iray hafa: mbola tsara ihany, rehefa mandeha ny fotoana (manana an'i Debian amin'ny solosainako lehibe aho ary Fedora amin'ny iray hafa tsy dia nampiasaina) manana ny voalohany aho bibikely, notateriko izany ary gaga!, ny ekipa Red Hat dia mamaly ahy, misaotra ahy noho ilay tatitra ary nilaza tamiko fa rehefa voavaha dia hampahafantatra ahy izy ireo. Ary dia toy izany no nitranga tamin'ny ambin'ireo bibikely izay notateriko. Amin'ny Debian, efa nohazavainao izany.
Vokany: mivadika amin'i Fedora aho ho distro lehibe, ankehitriny Fedora 20 miaraka amin'ny kde ary rehefa mila zavatra marin-toerana aho dia ao ny CentOS na Scientific Linux.
Tsy misy izany raha oharina amin'ny fanandramana hisoratra anarana ao amin'ny forum: ny fanaovana izany dia fihetsika saika utopiana (Niezaka ny hisoratra anarana amin'ny fomba mety rehetra aho, saingy tsy nisy nilana azy izany, satria ny Debian Forums dia mbola manakana ny IP amin'ny ISP-ntsika noho ny fiavian'ilay hoe Spam. , ary ny fampiasana VPN, tsy mandefa anao hafatra fanamafisana na zavatra hafa izy, noho izany dia afaka niditra an-tsehatra tanteraka aho Fanontaniana Linux satria ny zanak-drenin'izy ireo dia mampiasa sivana ISP fa tsy sivana CAPTCHA tena mandaitra toa ny reCAPTCHA).
Na eo aza izany, ny forum Debian no tena mamaly anao.
Mieritreritra aho fa tsy afaka mangataka amin'i Debian isika hanohana ny CentOS matihanina sy ny tohana Fedora amin'ny maha-matihanina. Fa izao dia izao, ary farafaharatsiny amiko, manandrana manampy ianao ary mampita anao izy ireo.
Izay mitaky fanohanana matihanina dia tsy azontsika atao. Saingy na eo aza ny fahasarotan'ny sampana sy ny maritrano araka ny nohazavaina tao amin'ilay lahatsoratra, dia tsy maintsy raisina an-tsaina fa misy mpikarakara sy mpanangona an-jatony natokana ho azy, noho izany ny tsy fahombiazana sasany dia tsy azo hamarinina. Azontsika atao ny mahita fa ny distros toy ny kaos dia tazomin'olona tokana ary fonosana 2000 no resahina.
Avy eo ny bibikely rehetra mifandraika amin'ny haino aman-jery dia heverina ho kely lanja ary afaka maharitra amam-bolana na taona maro mandra-pivoakany.
Ary etsy ambony dia heveriko (hevitra izany) fa ny apt no mpitantana fonosana ratsy indrindra na farafaharatsiny izay lesoka indrindra.
volana dia hoy izy:
Te hahafantatra ny zavatra takatrao amin'ny matihanina aho, satria tsikaritro fa maro ny olona mampiasa io teny io hanamarinana na hivarotra zavatra. Tiako ho fantatra ihany koa hoe iza ireo "matihanina" manome fanampiana matihanina amin'ny centos, ary mampitaha azy ireo amin'ireo distro hafa.
Raha ny filazan'ny matihanina dia tiako holazaina (araka ny hevitrao etsy ambany) fa an'ny orinasa iray izy ireo ary satria mivarotra vokatra novidiana izy ireo dia tsy maintsy mamaly izany. Debian dia mamaritra fa tsy misy fiantohana izany; CentOS dia an'i Red Hat ankehitriny, orinasa iray izay mahazo vola ka noho izany dia tsy maintsy ampamoahina amin'ny mpanjifany.
dia i debian ve tsy orinasa mivarotra serivisy
Ie, izany no antony nanombohan'ny hafatro tamin'ny "Ataoko fa tsy afaka mangataka fanampiana amin'i Debian isika ...". Ary tsy mimenomenona an'izany koa aho ao amin'ilay lahatsoratra.
ny fomba fijeriko dia ity, ary koa ho an'iza no nanoratra ny hafatra lehibe:
Tsy orinasa toa an'i Red Hat i Debian, vondrom-piarahamonina i Debian ary miasa amin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo izy ireo fa tsy an'ny "hatsarana".
Raha mila fahombiazana ianao dia manala ny maha-olombelona.
Iza no tokony handre fa mandre. Salama.
Eny, tsy mety ny mampiasa azy raha mila zavatra milamina ..., ho an'ny teninao farafaharatsiny.
Ny zavatra lazainao dia tena nahatonga ahy hivoaka an'i Debian tany amin'ny Fedora / CentOS .. Ary misy mpanolo-tsaina Debian ofisialy milaza aminao.
Izao i Debian dia mitovy amin'ny Ubuntu (miverina, miverina hatraiza hatraiza).
Tadidio fa ao amin'ny ekipa Debian iray ihany dia manana ubunteros vitsivitsy ianao ao amin'ny ekipa fampandrosoana nametraka mivantana ny fangatahana Ubuntu tao Debian .. Manana ny fitsapana ianao amin'ny fampiharana toa ny ufw na gufw izay ahitanao mivantana ny isan'ny kinova Ubuntu izy ireo dia avy amin'ny (12.04, 12.10 sns ..).
Mikasika ny Ubuntu, dia azoko fa avy amin'i Debian Squeeze dia napetrak'izy ireo ny Ivotoerana Rindrambaiko, satria tsy manohana ny Synaptic aho, ary ny Apper dia tena mifaninana amin'ny ivon-toeran'ny Software ao QT.
Manantena aho fa eo amin'ny Debian Jessie (fa tsy ao amin'ny toerany ofisialy) ny Ivotoerana Rindrambaiko.
Mampiasà Ubuntu na Centos 😀
Ubuntu, LTS ihany (14.04 no mendrika ampiasaina, ary tsara kokoa noho ny 12.04). Miaraka amin'ny CentOS, 6 amin'izao fotoana izao (ny 7 mbola tena maintso indrindra).
Efa ela aho no nampiasa Ubuntu 14.04 ary tonga lafatra. Ny antsipiriany ihany dia ny famindrana rakitra izay maharitra fotoana maharitra. Manantena aho fa hamboarina amin'ny kinova manaraka ity.
Niezaka ny hampiasa Centos aho, saingy diso ny fizotra nataoko. Aleo aho miandry ny fanavaozana anao manaraka 😀
Ary koa amin'ny fampiasana isan'andro, tsy hitako fa mahasoa azy io.
Ny olana famindrana rakitra dia avy amin'ny Ubuntu 11.04, ary izany no antony tsy nifindrako tany amin'ilay distro voalaza.
Momba ny CentOS, azoko tsara ianao. Na izaho aza dia manipy lesoka.
Uhhh, nieritreritra aho fa izaho irery.
Na dia ao amin'ny Xubuntu aza dia tsara daholo. Fa manantena aho fa hihatsara i Debian, satria tiako ny mampiasa Xfce ary tsy milamina izao.
Raha tsy izany, inona ny distro hafa amporisihinao amin'ny xfce sy ny fanohanana tena tsara.
Ao amin'ny Debian Testing (Jessie), avelao aho hilaza aminao fa ny XFCE dia milamina kokoa noho i Wheezy (na dia ekeko aza fa ny XFCE no birao matanjaka indrindra nampiasako tamin'i Debian). Saingy, ny olana dia ny famotsorana an'i Iceweasel, satria ao amin'ny kinova backport an'ny Debian-Mozilla, Ny famotsorana Iceweasel dia mitovy na milamina kokoa noho i Mozilla Firefox ihany, fa amin'ny kinovan'ny repos ofisialy Debian Jessie, ny mifanohitra amin'izay ihany no izy.
Raha toa ny ekipa Debian Mozilla koa dia nandray anjara tamin'ny poloney Iceweasel tao Jessie, azoko lazaina fa eo amin'ny tongotra ankavanan'ny Debian (raha ny marina, ny fampiharana ny sampana ESR an'ny Iceweasel ao Wheezy no safidy tsara indrindra ho an'ireo tsy mpanova, ary koa ao amin'ny kinovan'ny ESR an'ny Iceweasel dia tsy mila famerenana fehezan-dalàna izany).
Ary rahoviana, Slackware miaraka amin'ny XFCE dia safidy tena ankafizinao raha mila fitoniana tsara ianao miaraka amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana.
Raha noeritreretinao ny momba an'i Debian, dia azo antoka kokoa noho ilay iray ilay kinova andrana. Indrindra ny fampidirana amin'ny Xfce.
Raha nanana Slackware tao an-tsainao ianao, fa ny tadiaviko dia haingana na mora ampiasaina raha tsy mandanja ny rafitra. Na dia "maivana" aza i Ubuntu, Xubuntu dia misy ny fihemorana rehefa miasa miaraka amina fonosana misokatra vitsivitsy.
Nieritreritra an'i Mageia na OpenSUSE niaraka tamin'i Xfce aho.
Mandeha haingana loatra amiko ny famindrana ary indraindray manantona mandra-pahatapitry ny rafitra.
Miaraka amin'i Debian Wheezy dia nisy zavatra toy izany nitranga tamiko, na dia ny ahy aza no olana.
Ny lesoka nataoko dia ny fametrahana an'i Debian Wheezy 32-bit amin'ny birao misy ahy nefa tsy tsapako fa afaka miasa 64-bit ny solosaiko PC. Nanome ahy olana amin'ny GNOME 3.4 (izay, nialako) sy ny KDE 4.8 (… cofcofcof:QTCurse: cofcofcof ...), izay nahatonga ahy hisafidy ny XFCE.
Ho leo aho, notehiriziko tao amin'ny USB-ko, namolavola ny fizarako niaraka tamin'i Debian Wheezy, ary nametraka an'i Debian Jessie aho, ary toy ny tamin'ny majika, ny Debian Jessie reportbug dia toa namboarina, tamin'ny ambaratonga izay rehefa manavao azy io aho. mandefa bibikely izay efa voavaha aho, ary izao afaka mankafy horonan-tsary HTML5 amin'ny Chromium aho, ary ny olana KernelPanic tampoka dia namboarina tamin'ny fomba mahagaga taorian'ny nilalaovany Half-Life on Steam nandritra ny fotoana kelikely.
Mikasika ireo repo dia nomen'i Jessie fahatokisana aho tsy hampiasa ny seranam-piaramanidina (raha ny marina, novako ny kernel 3.2 ao amin'ny Debian Wheezy ho an'ny 3.14 ary ny valiny dia avy any Guatemala ho any Guatemala), ary ny marina dia, miaraka amin'ny fitaovako izay 100 % Chipset Intel, nanao zava-mahatalanjona aho, tamin'ny dingana iray mba hahafahako milalao lalao Steam haingana kokoa, ary amin'ny olako am-peo dia nanjavona izy ireo.
Raha te hifindra any Ubuntu ianao dia hiditra amin'ireo kinova izay taloha sy iray taty aoriana noho ny ankehitriny, izay tazomina miaraka (ny backports ao Ubuntu dia ao amin'ny Launchpad PPAs), ary manana fanohanana ireo sehatra tsy X86 izy io. na i X86_64 tena ory.
Amin'ny lafiny Slackware, zavatra hafa io: na raisinao avy amin'ny slacky.eu ny binary, na ianao manokana no manangona azy ireo amin'ny alàlan'ny Slackbuilds.
Na izany na tsy izany, tsy mahatsiaro tena ho fanboy an'i Debian aho, satria samy manana olana sasany momba ny fitantanana repos ny Ubuntu sy i Debian, ary vitsy ny mpampiasa manaiky izany toe-javatra izany.
Faly aho fa misy mpampiasa Debian mizara ny hevitro amin'ny fitsikerana izay manandrana manorina. Jessie's Xfce 4.10 dia tsara lavitra noho ilay milamina, indrisy fa ny carte électronique dia manakana ahy tsy hampiasa an'i Jessie ary hihoatra ny seranam-piaramanidina, izay ilaina ho ahy satria ny stable dia tsy manana fanohanana an'i NVidia Optimus (tsara, fa miaraka namboarina ireo sary roa) ...
Mampalahelo fa manana fitaovana manana fanohanana mpamily be dia be ianao toa ny karatrao tsy misy tariby (raha ny marina dia te hanampy tanana ny firmware an'ny modem Huawei E173 USB ao amin'i Debian Jessie aho, ary avelao aho hiteny aminao fa izy io dia tena pandemonium).
Ary mety aminao ve izany amin'ny Ubuntu?
Kara-tariby tsy misy tariby inona no anananao?
Fomba iray ahazoana manina eo amin'ny famakiana ilay lahatsoratra sy ireo sampana Debian. Saingy, faly aho fa nandao an'io distro io aho, ny tenako manokana dia voan'ny fiheverana tafahoatra izay napetrak'izy ireo tamim-pitoniana. Tsy misy ihany koa ny tsy fahampiana fonosana tapaka sy zavatra toa izany, saingy hey, efa zatra nanamboatra ny style Gentoo aho ohatra.
Ho 😀 io
Aleoko ny Slackware sy Debian in'arivony mihoatra ny Gentoo sy Arch.
Matotra aho, toa ahy fa amin'ny Debian, vitako ny manao ny zava-drehetra ao amin'ny Slackware, na dia bebe kokoa sy amin'ny fomba tsotra aza.
Mikasika an'i Gentoo, izao dia hizaha toetra azy aho, saingy manana fitaovana tena tsara izy io ary ho azon'ny Arch ny antony tsy tianao.
Izaho manokana dia tiako be ny Fedora, araka ny nolazain'izy ireo tetsy ambony ihany koa, Arch fa tsy dia be loatra ny milaza azy, bah eo anelanelan'ny fampiasana azy na tsia aho, fa amin'ny farany dia tsy maharesy lahatra ahy izy io, manana bibikely manelingelina maro izy ary , na dia manolotra fonosana fanampiny marobe ao amin'ny AUR aza izy ireo, ireo rehetra mahaliana ahy dia tsy mandeha, etsy andaniny, miasa bebe kokoa noho ny ahy ny Fedora, hatreto dia nahita bug 3 aho, saingy tsy dia matotra izy ireo ary iray ihany no zavatra mety ho lasa zava-dehibe.
Na izany aza, raha misy zavatra manintona ny saiko dia manangona fonosana izy ary tsy manolotra fomba hanaovana izany mora foana i Fedora, ny fomba fanao amin'ny tanana ihany, ary ny AUR ihany no atolotry ny AUR azy, fa tsy atolotra azy amin'ireo fonosana izay navadika ho binary, koa tsy dia liana amin'izany loatra aho.
Etsy ankilany, amin'ny Debian miaraka amina apt-build dia afaka manangona mora foana ianao, ary izany no antony hitako fa tena tsara ary mamono Slackware io.
Ary koa Gentoo sy Sabayon dia toa tsara be amiko amin'io lafiny io.
Na izany na tsy izany dia mbola misalasala ihany aho satria maharitra ny fanangonana fonosana ary ny marina dia, raha ampitahaina amin'ny bianrios, dia tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fampisehoana na dia misy aza.
Raha izaho manokana dia heveriko fa ny Sabayon no tsara indrindra, satria "binary" araka ny itiavanao azy io ary afaka mampiasa portage koa ianao hanangonana. Miaraka amin'i Debian, na dia marina aza fa afaka manangona amin'ny alàlan'ny apt-build koa ianao ary mety ho binary araka ny itiavanao azy, ny portage dia manome safidy maro hafa avy amin'ny zavatra hitako ary, ankoatr'izay, ny repo Gentoo dia malalaka kokoa.
Raha ny marina, Slackware dia nanome ahy vaky vitsy kokoa noho i Debian Stable XD
Ary ambonin'izany dia tsara lavitra ho ahy ny KDE noho i Debian sy Arch.
Raha fantatro fa nanana alalana hananganana i Debian, dia ho noeritreretiko tsara izany alohan'ny handaozana an'i Debian, saingy mbola manasongadina ahy ihany koa ny ahiahin'izy ireo momba ny fitoniana ka hatramin'ny fananana fonosana taloha kokoa noho ny mahazatra D:
Angamba noho ny fahazarana nahazatra ahy no nitoerako teto Gentoo, izay manome anao safidy hifanaraka amin'izay tena ilainao, ankoatry ny fahafahanao mamaha ny fiankinan-doha sy manamboatra ireo tranomboky vaky 😀
Eny, ny marina dia tena tiako tokoa i Gentoo, hizaha toetra azy vetivety aho
Mahaliana, na dia tsy tiako aza ny mametraka azy araka ny faniriana iray, dia tsy maintsy atambatra fa atambatra ao amin'ny Gentoo izy io.
Nahavita tsara ianao ... ny apt-build dia tsy manakaiky ny maha-malefaka sy fampandehanana mahery vaika azy ireo, tsy misy fampitahana azy ireo ... ny apt-build dia bebe kokoa amin'ny fanampiana na fanesorana ireo fiasa amin'ny programa ONE, raha tianao hampiasaina handrafetana ny rafitra iray manontolo dia vaky loha, tsy manohana patch ihany koa. .. ary mampiasa saina mba ho vavahady ..
Tena matotra ve?
Debian Stable dia toa marin-toerana kokoa noho ny Gentoo, indrindra ho an'ny USE. Aleoko ny Centos na Slackware.
Nandalo fitsapana gentoo nandritra ny 4 taona mahery aho, tsy olana velively, mankaleo mihitsy aza, tamin'ny taon-dasa nametraka fitsapana gentoo tamin'ny pc vadiko aho ary roa volana lasa izay tao amin'ny solo-tanako lahy. Kitapo telo miaraka amin'ny fanandramana gentoo ao ~ amd64 hanavaozana, ny ahy mivantana ary ny roa hafa amin'ny alàlan'ny ssh amin'ny tambajotra eo an-toerana.
Talohan'ny nampiasako ny archlinux teo anelanelan'ny 2008 sy 2010 raha tadidiko tsara ary nafoiko izy io noho ny famadihany ahy tamin'ny systemd sy ny bibikely gazillion.
Ny torohevitra tokana omeko an'ireo izay te hiditra amin'ny gentoo dia ny fanaovana izany amin'ny sampana miorina mandritra ny telo ka hatramin'ny enim-bolana farafaharatsiny, avy eo ho hitan'izy ireo samirery fa manana tombony ny fitsapana.
Tsy afaka milaza na inona na inona momba ny debian aho, tsy nampiasa azy velively, indray mandeha ihany tamin'ny 2005 na talohan'izay, nametraka azy aho ary hitako fa ny ankamaroan'ny fandaharana, ny menus-n'izy ireo dia nivoaka tamin'ny haino aman-jery anglisy, media tamin'ny Espaniôla ... izany no tsy fanajana tanteraka, na espaniola na anglisy, tao no nanaovako ny lakroa.
Raha ny marina dia mihevitra ny tenako ho mpahay siansa amin'ny solosaina aho fa tsy mpampiasa farany, ny zavatra tsara indrindra mety hitranga amiko dia ny fihaonana tamin'ny gentoo.
Manentana ahy hanao Gentoo Testing xD ianao, Funtoo kokoa aho… fa ny sampana amin'izao fotoana izao dia miteraka olana bebe kokoa noho ny voavaha….
Wow, aza mamorona fitsapana gentoo.
Mahatonga ahy haniry hiverina any Gentoo izany.
Tsy maintsy manandrana mankany amin'ny Testing isika
Apt-build dia tena voafetra, tsy hanangona ny fonosana rehetra noforoninao ianao ary tsy holazaiko anao raha mikasa ny hampanjifa ny fanangonana anao ianao, korontana.
Ny slack builds an'ny Slackware dia tsara kokoa, ary mazava ho azy fa ny Gentoo izay natao hananganana ny zava-drehetra dia tsy misy ifandraisany amin'ny apt-build, ny rafitra vokatr'izany dia zavatra hafa.
Fa maninona no tsara kokoa ny slack Builds? Tena voafetra amin'ny zavatra hitako izy ireo ary tsy azonao atao ny manangona izay rehetra tadiavinao, ho an'ny ankamaroan'ny fiankinan-doha dia mila mampiasa ny fomba nentim-paharazana ianao amin'ny fanangonana ary ny repository Slackbuild dia tsy manana rindrambaiko betsaka, avy amin'izay tiako jereo fa mitovy amin'ny fampiasana apt-build izy io, io ihany no mamaha ny fiankinan-doha.
Slackbuilds dia mamela anao manampy sy manala ireo fiasa (ohatra azoko atao ny manangona mpd tsy misy fiankinan-doha amin'ny pulsa) amin'ny fomba tsotra, miaraka amin'ny apt-build dia fanaintainana izany. Tsy fantatro hoe firy ny fonosana ananan'ny repository, kely lavitra noho ny azo antoka AUR, fa mihoatra ny ampy, ary afaka mandeha amin'ny lozisialy sy manangona ny farany ianao amin'ny rafitra tena marin-toerana (azo antoka fa manana olana vitsy kokoa noho ny amin'ny debian ianao ).
Ny fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha dia tsy ampahany amin'ny Slackware, raha mampiasa azy ianao dia manana, fa manana hatrany sbopkg
Fa ambonin'izany rehetra izany, raha te-hanangona sy hamaha ny fiankinan-doha sy ny fikirakirana tsiro izahay :: Gentoo
Ah ok, hitako ihany koa fa i Arch dia manana zavatra antsoina hoe ABS, izay ahafahanao manangona avy amin'ny PKGBUILD, dia mitovy amin'ny Slackbuilds izany. Ahoana ny hevitrao momba izany?
Eny tokoa, nanontany tena aho raha toa ka mametaka ireo rindranasa koa ny Slackbuilds, fantatrao ve raha izany no izy?
Eny, ao amin'ny Arch dia azonao atao ny manamboatra ny compilations-nao amin'ny alàlan'ny PKGBUILDs, ary tena tsotra ihany koa, miaraka amin'ny ABS dia azonao atao ny manamboatra ireo fonosana izay ao amin'ny tahiry ofisialy araka ny itiavanao azy. Na izany na tsy izany, na ny ofisialy na ireo AUR, azonao ovaina mora foana izy ireo.
Slackbuilds patch raha namboarina ho azy izy ireo, tadidio fa izy ireo dia script, ka maro amin'izy ireo no manana patch izay ampiharina ary ny hafa kosa tsy afaka, fa azonao ovaina foana izy ireo mba hanaovana izany.
Ah, tonga aho hanitsy izay nolazaiko momba ny Arch, hay ny ABS (Arch Build System) dia azonao atao ny manangona ireo fonosana azo alaina ao amin'ny repos ofisialy, mitovy amin'ny Slackbuilds miasa.
Omeko fiheverana bebe kokoa izy io. Na izany aza, mety tsara kokoa ny mampiasa Gentoo na Sabayon miaraka amin'ny Portage rehefa mila izany ianao, saingy mbola mijery izany aho. Angamba hapetrako rehefa tonga teo am-pamaranana aho
Nampiasako an'i Debian nandritra ny taona maro ary nanana olana vitsivitsy koa aho ary tonga tamin'ny fotoana nahatsapako fa ny tokony hataoko amin'ny OS-ko dia tsy mitaky ny hampiasako an'i Debian. Ankehitriny aho dia nampiasa Fedora nandritra ny roa taona (izao nandritra ny telo) ... <3 Misaotra ny lahatsoratra.
Mbola mieritreritra aho fa ny fampianarana tsara kokoa dia tonga noho ny lahatsoratra hevitra
Ary lazaiko foana fa tsara kokoa ny manaja ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra iray ianao, alohan'ny hamoahana fepetra tsy mitombina dia mangina. Tsy lahatsoratra momba ny hevitra fotsiny io, zava-misy io, zavatra mitranga ary tokony horesahina.
@Elav, tsotra ny valin'ity fanehoankevitra ity:
Manorata fampianarana ary apetraho. Tondro.
mahita lelafo ny oroko, ary efa hanapoaka xD ny detector phorobard-ko hahaha
Hahaha .. .. nanasa anao ve aho popcorn?
Tsy miambina ahy!
Tsia, satria izay rehetra nolazainao dia marina, ary ny marina dia nanana olana tamin'i Debian Wheezy sy ireo seranam-piaramanidina aho mba hanohanana ireo bibikely ireo dia nisafidy ny hifindra tany amin'ny sampana fitiliana aho (izay, tsapako fa misy fahatokisana bebe kokoa ary Diniho fa any amin'ny sampana miorina, ankoatr'izay dia nametraka Steam tsy nisy olana toy ny audio aho).
Ary amin'ny zavatra hitako, tsy dia mirehareha ity lahatsoratra ity araka ny noeritreretiko (i Debian dia mizara olana sasany izay ataon'ny Ubuntu, noho izany ny filazana fa ny Debian dia ambony noho ny Ubuntu dia marina ny antsasany).
Tsy mino an'izany aho. Efa 1 taona teo ho eo no nampiasako an'i Debian ary leo ireo olana sy olana miaraka amin'i Debian, dia nifindra tany amin'ny Ubuntu 14.04 aho. Wow, inona ny fahasamihafana misy sy ny fitondran-tena tsara kokoa, manohy amin'ny Ubuntu efa ho 2 volana aho ary miaraka amin'i Xubuntu, tsy misy olana; tahaka ny ilazako ilay olona handefasana rakitra dia miadana be, afa-tsy amin'ny Xubuntu.
Ao amin'ny Debian stable, ny olana notadiaviko rehefa nampiasa ny seranam-piaramanidina tamin'ny bibidia aho, raha tany Jessie kosa dia nihena be izy ireo (mampihomehy, Debian Jessie no fototry ny Ubuntu 14.04, ary mandritra ny roa herinandro izay nampiasako azy, an'ny Marina fa tsy manenina na inona na inona eto amin'izao tontolo izao aho nifindra monina tamin'ny kinova fitsapana tsara indrindra nataon'i Debian niaraka tamin'i Squeeze sy Lenny).
Tsy ho ahy.
Tsy haiko raha ny kernel miaraka amin'ireo mpamily Ati, fa rehefa te hampiasa firefox na google chrome (azoko ampiasaina tsy misy mpanafaingana sary) dia toa niainga ny pc. Nandre betsaka, miaraka amin'ny Ubuntu izao, dia miasa tsara kokoa noho ny Windows 8.1.
Saingy mbola hitako ihany ny firaisan-kina somary mavesatra na sarotiny. Ka te hiverina any Xfce aho dia mieritreritra fa hiaraka amin'i Mageia na openSUSE:
Antergos dia hoy izy:
Misaotra lahatsoratra tsara dia tsara; Mino ny fiheverako manetry tena sy tsy mahalala aho fa nanao distro avo lenta kokoa izy ireo taona lasa izay, tadidiko fa rehefa nametraka ubuntu aho tamin'ny fotoana voalohany tonga lafatra ny zava-drehetra, taona vitsivitsy taty aoriana dia tsy fantatro ilay karatra tsy misy tariby ao anaty solosaina iray ihany, ary androany taorian'ny taona maro dia tao aho antecedents, izay tsy naniry ny hanana andohalambo nefa tsy natahotra ny handrisika azy… ..
Mamaly an'i Antergos
Mora ny fametrahana azy io, hoy aho aminao, saingy marina fa mamela an'i Antergos vita daholo ny rehetra
Ataovy ao an-tsaina fa satria ny kernel dia mandeha amin'ny lafiny iray, ny firmware amin'ny lafiny iray, ary ny fizarana tsirairay dia mandeha amin'ny azy manokana, sarotra ho an'ny olona tsy manana fahalalana lehibe momba ny GNU / Linux ny hahafantatra ny antony mahatonga ny singa iray izay tsy nandeha teo aloha. Indraindray ianao lasa adala mitady vahaolana, 🙁.
RRT dia hoy izy:
Manaiky tanteraka aho, tsy maintsy sarotra ny mitazona sampana sy maritrano marobe, ary amin'izao fotoana izao dia mahita fonosana marobe tsy miovaova isika satria tsy misy mitazona azy ireo. Antenaina ary afaka manova fanovana izay manampy amin'izany lafiny izany aho satria i Debian dia fizarana lehibe ho an'ny karazana mpampiasa.
Valiny amin'ny TSR
Eny, nampiasa an'i Debian aho nandritra ny 6 taona, saika amin'ny endriny marimaritra iraisana, ary ny marina dia mila manaiky 100% amin'ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity aho. Ary tsy afaka milaza koa aho fa nahita bibikely, tamin'ny fomban'ny Ubuntu 11.04 sy taty aoriana, saingy tsy haiko, satria i Debian dia tsy ilay distro izay nampamirapiratra ny masoko tamin'ny fahafaham-po isaky ny famoahana vaovao. Miankina amin'ny Xubuntu 14.04 LTS aho, hatramin'ny nanombohan'ny Ubuntu tamin'ny Unity dia anti-ubuntera mahery aho ... 🙁
Tokony hampiasa Antergos ianao. Minoa ahy linuxXgirl, tsy hanenenanao izany, Arch hooks ary mahatratra ny fiainana, jereo aho 😀
Eny, ny fanontaniana amin'ny ahy dia any amin'ny repo, tsy manana toerana hahitana azy ireo aho. Hatreto dia afa-po tamin'ny fanavaozana / fampidinana fonosana ftp infomed ho an'ny Ubuntu sy Debian aho, saingy tsy afaka manao izany avy amin'ny klioban'ny tanora na avy amin'ny repo ofisialin'ny distro satria manana proxy maharikoriko misakana ahy aho.
Imbetsaka aho no nanandrana nanandrana ny Arch, OpenSUSE, Fedora ... na ny FreeBSD ary io toe-javatra misy an'ireo repo io dia nanakana ahy. Ary tsy afaka mandeha mitady azy ireo aho na aiza na aiza satria tsy manana fanampiana ivelany manana fahaiza-manao ampy aho, izany hoe, ny ahy dia ... na Ubuntu na Debian eo amin'ny tsipika (avy amin'ny FTP Infomed) na tsy misy ... !!! ! 😥
Azoko tsara ianao, satria talohan'ny nahazoako hafainganam-pandeha amin'ny Internet izay mitovy amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny Internet indrindra any Kiobà, ary fanavaozana fotsiny ny Mandrake Linux dia pandemonium ary tsy niverina aho raha tsy efa nahazo internet mendrika ary nahafantatra an'i Debian.
Raha mampiasa Debian Stable ianao dia tsy fantatrao izay tsy ampy anao. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fitsapana an'i Debian aho, ary afaka milaza aminao aho fa misy ny mety hisolo ny XFCE ny GNOME ho toy ny tontolon'ny birao (Nohamafisiko izany rehefa nampidina ny installer an'i Debian Jessie aho tamin'ny 64 bit, ary Sehatra Desktop hafa, Miseho ny GNOME fa tsy XFCE).
Ny kinova Debian tsara indrindra nampiasako dia ny Squeeze, satria izy no mpisava lalana nametraka ny ivon-rindrambaiko hanamorana ny fametrahana ny rindranasa.
Ary rahoviana, ny foibe rindrambaiko Debian Jessie dia mety tsy ho an'ny kinova farany.
Nampiasa Debian Testing aho, fa ny fijerena ny fitaratra fitaratra izay tsy maintsy andraisako azy ireo dia tsy nihetsika nandritra ny fotoana ela. Tsy maintsy naka an'i Jessie / Sid aho, ary saika tsy maintsy notapahiko ny hatoloko tamin'ny fanavaozana hatrany. Raha ny amiko dia mila mampiasa zavatra somary milamina kokoa aho, indrindra noho ny olana eo amin'ny fifandraisana. Ny kinova Debian tsara indrindra nampiasako dia Lenny amin'ny PC hafa; Ny fametahana dia nanome ahy olana amin'ireo mpamily video (64bit) sy ireo mpamily modem (64 bit). Ankehitriny dia hifindra any amin'ny distro miorina amin'ny Xubuntu 14.04 LTS antsoina hoe Tuxtrans aho, ho an'ny mpandika teny.
Ah tsara. Momba ny fanavaozana tsy tapaka, takatro ianao (raha ny amiko, tsy olana izany noho ny bandwidth ananako, na dia tena tsy mahazaka ho an'ireo manana bandwidth ambany indrindra aza izany).
Momba an'i Debian Lenny, miombon-kevitra aminao aho, satria izany no dikan-tenin'i Debian izay tiako be tamin'io distro io, ary tao amin'ny Squeeze, ilay PC teo aloha niaraka tamiko Pentium IV dia nankafy azy io toy ny fonon-tànana, ary koa mankafy ny lozisialy Navoaka tamin'ny Debian i Center.
Mivavaka aho mba hametrahan'i Debian Jessie ny kinova rindrambaiko tsara kokoa (momba ny birao, tsy manana olana aho).
Ny firaisankina no hany zavatra tiako momba ny ubuntu xd
Ivan Molina dia hoy izy:
Miaraka aminao miaraka amin'ny Unity aho! Ny firaisana dia manana ny hatsarany: 3
Valiny tamin'i Ivan Molina
debian test no tiako indrindra ary miaraka amin'i kde
miaraka amin'ny xfce tiako ny fahamarinan'ny tontolo iainana
miaraka amin'ny gnome dia tsiro kely diky kely
izao dia ao anaty kanelina lmde aho ary mandeha tsara fa tsy dia havaozina noho ny debian dia omeko fotoana izao
naoty: haingana kokoa ny fanandramana debian na dia mitovy fototra aza izy ireo
Izaho dia nifindra monina mba hanao fitsapana amin'ny PC misy ahy satria Wheaszy dia fiasco satria 64 PC no nanohanan'ny PC ahy, ary satria tsy tsikaritro izany dia napetrako teo aminy ilay kinova 32-bit.
Nampiasa an'i Debian koa aho. Ny finamanana nifaneraserako tamin'ny distro dia tsara, nampiasako azy nandritra ny roa na telo taona nisesy, avy any Etch (miaraka amin'ny kernel ivelany) ary avy eo amin'i Squeeze. Saingy heveriko fa i Debian dia miala amin'ny filan'ny mpampiasa ankehitriny ary tsy mijery fa mitaky mpamily sy programa vaovao nohavaozina ny teknolojia vaovao. Marina, ny filozofia "fiarovana" dia zava-dehibe indrindra, saingy mino aho fa manamboatra ny hadisoany amin'ny programa i Debian, izay anaovan'ny programa toy izany ny kinova vitsivitsy namboarin'izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa Archlinux, matevina, kely aho (tsy misy fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha miankina aminy) ary AUR izany.
Ny zavatra tsara izay tsy maintsy safidintsika eo amin'ny tontolon'ny Linux.
Hevitro manetriketrika izany
Marina izany, heveriko fa fitsikerana tsara izany. Ny olan'ny fiankinan-doha mitovy amiko rehefa manandrana mametraka drivr mihidy toy ny fglrx. Hita fa very fiankinan-doha maro, ary mila manao pin-apning ianao, na mijery snapshot.debian.org
Nanao tatitra maromaro aho tamin'ny lists.debian.org, ohatra, solosaina AMD maromaro no tsy nanana ny kitendry USB nandritra ny fametrahana azy. Famerenam-bidy izay nanjo azy ireo, fa navelany 3 volana aho nefa tsy afaka nametraka fitsapana. Ary raha ny valin'ilay tatitra dia mampiasa intel izy ireo ary tsy tsapany izany. Faharetana, faharetana be, ary andramo ny mampiasa stable.
r0uzic dia hoy izy:
Toa lahatsoratra mahaliana ho ahy izany nefa diso be ihany ny ataon'ny sampana:
1. Ny sampana fanandramana dia tsy sampana, fitahirizana entana misy fonosana izay noho ny maha zava-dehibe azy ireo (kernel, tontolon'ny birao) dia tsy mety amin'ny tsy milamina ary mila mandany fotoana fitiliana bebe kokoa. Azo ampiasaina tsy misy olana amin'ny fitsapana na tsy milamina.
2. Ny repositories any backports dia tsy lehibe ary miankina amin'ny eny na eny amin'ny rantsany lehibe, ampiasaina amin'ny fonosana izay mila fanavaozana izy ireo na dia efa milamina aza izy ireo, toy ny antivirus na ny rafitra encryption. Averiko ihany: tsy lehibe izy ireo ary tsy azo isaina ho tahiry ao anaty drafitra azo antoka / andrana / tsy marin-toerana.
3. Tena mihevitra ny taloha sy ny LTS ve ianao? Ireo dia ho an'ny orinasa ary ny fiheverana azy ireo amin'ny birao dia tsy misy dikany.
Valio i r0uzic
Tazomy ny mikasika ...
1.- Sampana andrana.- ny Debian Jessie sy ny sidina fanandramana SID.
2.- Seranam-piaramanidina sampana efa antitra / marin-toerana.- Miankina amin'ny repo lehibe izany, ankoatry ny fanampiana kojakoja tsy hita ao amin'ny repo lehibe.
3.- Oldstable / LTS.- Mety ho an'ny olona ara-dalàna. Tsy voatery hanana ny farany indrindra ianao.
Tsy manana ahiahy momba ny andrana aho, marina izany, 🙂.
Ny tranga backports dia tiako ny tsy hampiasa azy ireo, tsy eo amin'ny Debian aho noho ny fonosana vaovaon'izy ireo. Fa ny Wheezy tsy misy backports dia tsy manohana ny NVidia Optimus, misy na tsy misy mpamily tompony. Adidiko ny mampiasa azy ireo, satria i Jessie koa tsy mahita ny karatra tsy misy tariby. Tsy sampana lehibe izy ireo, saingy ny tiana hambara dia hoe ao amin'ny tahiry ofisialy izy ireo; Tiako kokoa ny hitovy amin'ny teo aloha, miaraka amin'ireo seranam-piaramanidina, ary raha misy ny lesoka, dia resaka tahiry ivelany sy tsy ofisialy no anaovana izany.
Mikasika ny taloha sy ny lts dia tsy hampiasa azy ireo ny mpampiasa birao, fa ny tena izy dia betsaka kokoa ny sampana hotehirizina, izay amin'ny farany no olana: arakaraka ny isan'ny sampana no tsy manam-potoana firy amin'ireo lehibe.
Ary farany izay olona manoratra zavatra mifanaraka.
Misy tahiry telo an'ny Debian: stable, andrana ary sid.
Ny zavatra hafa rehetra dia "tranga manokana" izay nangatahan'ny fiarahamonina noho ny antony samihafa.
Ny fanandramana dia noho ny fanavaozana tsindraindray kokoa noho ny sid, fa mampiahiahy tokoa ka natokana izy ireo (ny mpampiasa dia tsy tokony hampiasa fonosana avy eto, satria mety hampidi-doza sy hanimba izany na dia ho an'ny olona za-draharaha indrindra aza).
Ireo backports dia zavatra tena manokana, angatahan'ny vondrom-piarahamonina ihany koa, izay tsy ilaina akory ny fanindriana tsara (ny backports dia fonosana nalaina tamin'ny famoahana an'i Debian manaraka (antsoina hoe «fanandramana»), namboarina ary natambatra indray hampiasaina ao amin'ny tranon'omby Debian. Ny fonosana dia misy ihany koa amin'ny famotsorana an'i Debian manaraka, azonao atao ny manatsara ny rafitra stable + backports raha vao mivoaka ny famoahana Debian manaraka.)
Ny perla farany izay nidiran'i Debian, dia ny nanome ny LTS hamintinana (https://www.debian.org/News/2014/20140616), noho izany dia hisy marin-trano efa tohanana amin'ny fotoana iray.
Raha fintinina, ity "korontana" ity dia tsy toa izany raha tsy mivadika amin'ny fitsipiky an'i Debian ny fifikirana amin'ireo rantsany telo, izay, na izany aza, dia izy ireo ihany no ekena ho ofisialy (https://www.debian.org/releases/index.es.html)
Nampiasa an'i Debian nandritra ny 9 taona aho, tao amin'ny sampana miorina sy mandinika, arakaraka ny ekipany. Tsy nanana olana tamin'ny fitsapana fotsiny aho, fa tsy nilamina mihitsy, fa tsy nisy tsy voavaha tao anatin'ny fotoana fohy. Ary ny fitiliana dia mitovy amin'ny "mitady olana" minia, satria io sampana io dia natao hitsapana olana fotsiny.
Tsy tiako mihitsy ny Slakware, saingy olan'ny hoditra io.
Avy amin'ny Red Hat Fedora, ny tena izy dia mihoatra ny fenitra natao ho an'ny GNU / Linux, noho izany dia mila mihodina miaraka aminy foana ianao raha te hitantana zavatra avy amin'ny antoko fahatelo.
Ary avy any Gentoo, tsy nanandrana azy mihitsy aho; Manana apt-build aho, izany hoe, Debian ankafizin'i Gentoo 😉
Tena nifanaraka, Debian miasa tanteraka raha mbola ampiasaina tsara, ny backports dia tsy natao hanavao ny rafitra iray manontolo fa fonosana manokana, ary ny andrana dia ho an'ny mpamorona, izay fonosana napetraka avy eo dia very antoka.
Javier sy dhunter, heveriko fa tsy mbola nijaly tamin'ny bibikely izay nolazaiko momba ny forum Debian (rohy ato amin'ny lahatsoratra) momba an'i Wheezy sy Xfce aho, ianareo roa.
1. Ny fametahana dia tsy mamoaka rakitra sasany na dia manohana azy ireo amin'ny fitsipika aza (ohatra ny .zip an'ny JDownloader, avy amin'ny tranonkala ofisialiny).
2. Xfce manager manager dia tsy mifanaraka amin'ny Xscreensaver, na dia i Xfce aza dia manoro hevitra an'i Xscreensaver amin'ny fametrahana azy.
3. Tumbler dia manome olana amin'ny drive misy anao ary indraindray lasa adala (indray mandeha nofenoiko ny ondrilahy 8GB mandra-pahafatiko ny fizotrany).
4. Ny sensor ny mari-pana dia manome hafatra tsy misy.
5. Ny firafitry ny Xfce dia miteraka triatra amin'ny fitaovana samihafa.
Mbola averiko ihany: tsy mbola nitranga tamiko tao amin'ny Debian Squeeze izany. Ary ny Xfce 4.10 dia manafoana ny bug 1 sy 3 izay lazaiko (ny hafa kosa mbola eo). Angamba raha tsy nisy be loatra ny hitazomana azy ireo, na raha mailo kokoa ireo mpamorona Debian, dia tsy ho nivoaka niaraka tamin'ireto bibikely ireto i Wheezy. Raha ny fanazavana, dia nitatitra daholo, rehefa maneho hevitra ao amin'ilay rohy aho, saingy tsy misy miorina tsara.
Octavio Alvarez placeholder image dia hoy izy:
1. Azavao ny momba ny JDownloader (mety hoe JDownloader izay tsy mandeha miaraka amin'i Debian).
2. Tsy misy hevitra momba an'i Wheezy; Mampiasa Sid aho ary mandeha tsara.
3. Azonao antoka ve fa olan'ny Debian io fa tsy olana Tumbler?
4. Ao amin'ny Sid dia mahita hadisoana aho miaraka amin'ireo sensor hddtemp, izay mangataka ahy hitantana alalana amin'ny fomba iray. Tsy haiko raha toa ilay lesoka ihany.
5. Mampiasa Xfce aho izay mampiasa ny mpamorona X.org. Tao amin'ny IRC dia nanolorana ahy hametraka Compton satria ilay iray ao amin'ny X.org dia (na tamin'izany fotoana izany) somary tapaka. Azo antoka fa tsy olan'ny Debian.
Manana tatitra momba ny iray amin'izy ireo ve ianao, na any amin'ny hulu na any Debian? Avy amin'ny iray amin'ireo tatitra ve ianao manana fampahalalana manokana momba ny niandohan'ny olana na patch?
Valiny tamin'i Octavio Alvarez
Napetrako indray ilay rohy izay hazavaiko amin'ny teny anglisy, satria heveriko fa nanana hadisoana aho tamin'ny nanoratako azy tamin'ny lahatsoratra tany am-boalohany: http://forums.debian.net/viewtopic.php?t=110150 . Mikasika ny lesoka 2, na dia ao Sid aza ianao dia mbola manana ny lesoka ihany: raha nanetsiketsika ny mpitantana herinaratra Xfce ianao dia sakanan'ny Xscreensaver izany. Mandehana mankany amin'ny rohy amin'ilay pejy izay ampifandraisiko.
Tsy misy manokana ny an'i Debian, fa izy ireo kosa dia notaterin'ny Debian Xfce, izay mitovy amin'ny Xfce ...
raha mbola tsy nampiasa Gentoo ianao ... dia tsy afaka miteny ianao hoe "manana apt-build aho, izany hoe, Debian faly amin'i Gentoo;)" ..... tsy misy apt-build tsy dia feno toa an'i Portage ...
Manamarina ny zavatra hamafisinao aho, ny malefaka mipoitra miaraka amin'ny portage dia tsy misy mitovy aminy, fa arakaraka ny mahamora kokoa no mampitombo ny fahasarotana, amin'ilay andian-teny fantatry ny hoe "lazao hoe iza no miaraka aminao ary holazaiko aminao hoe iza ianao dia ", ny fampitahana amin'ny gentoo / funtoo dia" asehoy ahy ny /etc/portage/package.use dia holazaiko aminao hoe iza ianao "... hehe.
Mazava ho azy fa ilaina ny milina mahery, zavatra mazava be io, hoy aho farafahakeliny 4 cores sy ondrilahy 8G, mba hisorohana ny fijaliana amin'ny aretin'andoha, eto aho dia manana fx8350 amin'ny 4.5Ghz miaraka amin'ny ondrilahy 16G amin'ny 2133Mhz ary ny fonosana mavesatra indrindra araka ny fantatrao dia maimaimpoana, naharitra ela ny fanangonana farany:
Wed Jun 25 02:13:05 2014 >>> app-office / libreoffice-4.2.5.2
fotoana mitambatra: adiny 1, 30 minitra ary 15 segondra.
Raha ny zavatra novakiako tamin'ny fanehoan-kevitra dia toa mitovy ihany ny zava-mitranga amin'ny debian, izay nilazan'izy ireo fa ny fitsapana debian dia tsara kokoa ary tsy dia manome olana firy, ary izany zavatra izany no mitranga eto gentoo, mora kokoa ny manafina ny kinova farany an'ny fonosana izay manana bibikely ary mampiasa ny kinova taloha na ny kinova tsy miovaova, toy izay milamina ary manandrama mampiasa kinova fitsapana, ho an'ny aretin'andoha masina amin'ny fiankinan-doha.
farany misy hevitra hafa mifandraika ihany, fa tsy olona "tsy mahalala" ny karatra findainy ary mividy rindrambaiko nefa tsy fantany aloha raha tohanana na tsia!
Nampiasa debian aho nandritra ny 6 taona, tany amin'ny stable tsy nanararaotako ny seranam-piaramanidina ary samy niaraka tamin'i kde sy xfce avy tamin'i Lenny aho dia tsy nanana olana, na ireo vitsivitsy izay nisy mora vahana (izay tsy dia nisy fanakianana, effetsan'ny birao ohatra. ).
Izaho dia tao amin'ny Debian Sid niaraka tamin'ny kde nandritra ny 7 na 8 volana ary milamina tsara izany. Eto izy ireo dia nanoro hevitra ny andohalambo satria raiki-pitia izany, eny ... Manoro hevitra an'i debian sid aho satria raiki-pitia izany ary milalao aho fa tsara kokoa noho ny andohalambo.
errata: izay lazainy fa rindrambaiko dia tokony ho hardware no nahatonga azy io.
Miala tsiny aho raha tsy miombon-kevitra aminao mpianatra, tsy hoe satria tsy liana i Debian Sid, fa satria tsy manana olana amin'i Arch aho.
Zavatra iray hafa, raha mijery eto isika https://packages.debian.org/search?keywords=kde&searchon=names&suite=unstable&section=all azontsika atao ny mahita ny fahasamihafana amin'ny fonosana amin'ny lafiny kinova ho an'ny KDE, ohatra.
Ao amin'ny Arch dia tiako ny KDE 4.13.2 tsy misy olana, milamina, haingana ary mino ahy ianao, afaka hitanao ny mahasamihafa ny fonosana KDE 4.11 sy 4.12 (misy amin'ny SID) sy ny fonosana KDE 4.13.2 azo alaina ao amin'ny Arch.
Na izany na tsy izany dia tsy ny hanao ady masina amin'izany no ataoko, raha toa ka tsara ny ataonao amin'i Sid, rangahy, arahaba soa 😉
Ovay: Rehefa manamarina ny rohy indray aho dia mahita fonosana avy amin'ny KDE 4.11, KDE 4.12 ary KDE 4.13.1 .. WTF? Ireo rehetra tafapetraka miaraka?
Tsy fizarana tonga lafatra i Debian, maro ny bibikely, fa raha manomboka mitady lesoka amin'ny zavatra ianao dia ho hitanao fa zava-misy miharihary izany. Tsy haiko hoe inona ny korontana amin'ireo repositories, nandritra ny fotoana nampiasako ny debian, nampiasa ny SID sy ny fitsapana aho, ny Stable dia tsy safidy velively, ankehitriny ny fonosana rehetra alehako na farafaharatsiny 95% amin'izy ireo dia miditra ny trano fitahirizana ofisialy, mitaraina ny amin'ny mety ho fanodinkodinana ireo repo, dia toy ny milaza fa ny tsy fahombiazan'ny Ubuntu, dia ny manana PPA 1 tapitrisa.
Tsy toy ny Ubuntu, izay matetika manana olana maro raha vantany vao manavao azy ianao (ary ny tiako holazaina dia ny birao, izay ny tanjony voalohany), matetika i Debian dia manome anao lesoka mora vahana (tsy tsotra toa an'i Slackware, fa farafaharatsiny, izy ireo Tsy dia matotra toy ny an'ny distros mihodina ary ao amin'ny sampana fitiliana dia ilaina izy io na dia milamina aza).
Eo amin'ny sisin'ny sampana fitiliana, Efa nomeko ny hevitro momba an'io (fonosana manan-danja roa tsy hita izay azonao apetraka, ary voavaha). Farany, nanao vivery ny aiko aho ary ny tena marina dia, ho an'ny fitaovako izay 100% chipset Intel, ity kinova an'i Debian ity dia nilatsaka tahaka ny lanitra.
Na izany na tsy izany, miaraka amin'i Debian Jessie, afaka milalao antsasaky ny fiainana amin'ny farany aho amin'ny farany.
PS: Opera Blink dia be ranoka noho ny Chromium sy Chrome miaraka.
Mino aho fa ny fizarana tsirairay dia misy zavatra hampianarina antsika, ary izay no tsy mahafa-po ahy iray fotsiny. Ny tiako indrindra dia i Gentoo noho ny fahaizany mampifanaraka, fahagagana ara-teknolojia izy io.
Heveriko fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy ilaina ny manova distro, na dia tratry ny olana manokana amin'ity lahatsoratra ity aza aho izay nahatonga azy ireo hanova distro.
Manaiky tanteraka an'io lahatsoratra io aho. Heveriko fa manarona be loatra izany ary mety ho ratsy amin'ny debian rehetra ...
Mampiasa Kubuntu 14.04 aho ary tena faly aho, tsy manana olana. Ary manana Xubuntu 14.04 amin'ny solosaina hafa aho ary tena mahomby tokoa. Izaho dia nanana olana kely fotsiny tamin'ny monitor sy ny resolutions (satria ny marika dia tsy marika tsara).
Ny marina dia te-hanandrana an'i ChakraOS Descartes aho, izay milaza fa tena mandaitra ary tsara be ny KDE. Olona hampiasa azy io?
Miarahaba ary manohy amin'ity sombin-bilaogy ity.
Alohan'ny Descartes dia manoro hevitra an'i KaOS aho.
Tsy fantatro. Aleoko ny mametraka Arch + KDE araka izay nokendren'Andriamanitra (miaraka amin'ireo baiko voatondro sy mampiasa fonosana KDE-Meta).
Ny zava-mitranga amiko miaraka amin'i Debian dia ny tsy fahafantarako ny momba ny sampana Stable. Efa nolazaiko tamin'ny fotoana hafa, ny zavatra Miorina dia noho ny zavatra heverin'izy ireo fa tsy noho ny tena izy. Ny sasany nanome ohatra ny XFCE, azoko lazaina ny maro hafa.
Ny Stable dia heverina fa misy ny zavatra marin-toerana rehetra, ary tsy izay mijanona ho marin-toerana satria raha vao niasa tsy nisy olana, na dia kinova efa taloha be aza izany. Tokony hamerina ny anarana hoe Stable amin'ny SomethingOldWhoOneTimeWorked izy ireo.
Saingy tsy hanao kitay amin'ilay hazo nianjera aho, nampiasa izany nandritra ny taona maro ary ho an'ny mpizara dia tiako indrindra izany.
Izany indrindra no niandohan'ny olana:
Debian Stable (ary, azontsika lazaina, Debian amin'ny ankapobeny) dia TSY natao hampiasaina voalohany ho OS birao hampiasaina isan'andro.
Tsy misy antony hanamarinana ny "fitoniana" be loatra, afa-tsy amin'ny mpizara.
Izany no mahatonga ireo "boka" sy tsy fahampian'ny fikojakojana ireo hita ao anaty fonosana izay misy ifandraisany amin'ny fampiasana amin'ny birao, amin'ny mpamily video, fampiharana multimedia sy programa miaraka amina interface interface amin'ny ankapobeny.
Etsy ankilany, ny fitoniana dia tsy azo antoka amin'ny "fonosana taloha" toa an'i debian. Mifanohitra amin'izany no izy, matetika, ireo fanovana vaovao dia mitondra fanitsiana ireo olana taloha, fa tsy ireo endri-javatra vaovao "mba hitsapana" fotsiny. Raha ny marina, ny tanjon'i debian amin'ity politika ity (raha ny hevitro) dia ny tsy "hanelingelina" ireo mpampiasa amin'ny vaovao "tsy ilaina".
Izany no mahatonga ahy hieritreritra fa rehefa manapa-kevitra amin'ny distro ianao dia mila mahafantatra tsara ny tanjony: raha mila distro hampiasaina isan'andro amin'ny birao ianao dia safidy mahatsiravina i Debian Stable. Misy distro tsara an'arivony ho amin'izany tanjona izany. Mazava ho azy fa amporisihiko 100% izy io hampiasaina amin'ny mpizara na amin'ny fampiasana "orinasa", izay tsy mila fanovana mandritra ny taona maro, izay ny teny filamatra no mibaiko indrindra: "raha mandeha izy dia aza kitihina."
Izaho, amin'ny anjarako, faly amin'ny Arch: 0% fiankinan-doha sy fitahirizana olana, miaraka amina fonosana havaozina 100% ary ny fampiharana fantatra rehetra dia misy eo no ho eo (ary raha tsy ao AUR dia ampidirinao ihany).
Miombon-kevitra amin'ny zavatra rehetra izahay !! U_U
Moa ve ny fampiasana Debian Stable eo amin'ny birao dia toy ny fametrahana an'i Mascherano mandroso.
MANDEHA ARGENTINA !!!
Tsy manaiky aho. Raha mametraka an'i Mascherano ho mandroso ianao ary mahatratra tanjona betsaka toa an'i Higuaín, dia izay no zava-dehibe, sa tsy izany?
Nampiasako an'i Debian stable ho biraom-baravarako nandritra ny taona maro, ary nandritra izany fotoana rehetra izany, na ny famintinana na ny fisotroan-dronono, tsy bibikely iray akory, ary afaka manisa bug amin'ny rantsan-tànana iray aho.
Ny tadiaviko dia ny mahazo antoka tanteraka fa azo antoka ny rindrambaiko ary tsy hahantona mihitsy izany. Ny vidiko izay andoavako azy dia kinova taloha amin'ny programa nataoko, saingy vidiny ankafiziko izany.
Mikasika ny olan'ny Backports, ny famakiana ny lahatsoratra sy ny hevitra, dia manome ny fiheverana fa ilaina na voatery ny fampandehanana ireo trano fitahirizana ireo, raha tsy izany. Ireo fonosana ireo dia ampiasaina mba hahazoana programa sasany amin'ny kinova vaovao, ohatra, Libreoffice, Iceweasel.
Ary araky ny efa fantatrareo rehetra dia tsy mametraka, na manavao, na miantraika amin'ilay rafitra izy ireo, raha tsy hoe mampiasa ny baiko manokana "sudo apt-get -t wheezy-backports install (anaran'ilay programa tiana hapetraka)".
Noho izany, izay rehetra voalaza ao amin'ny lahatsoratra momba ny olana amin'ireo repositories ireo dia vokatry ny fampiasana azy ireo amin'izay tsy izy. Raha ny laharam-pahamehana amintsika dia ny manana kinova farany vao haingana momba ny programa rehetra, tsara kokoa ny mametraka ny fitsapana ary manadino ny sampana marin-toerana.
Raha ny marina, any Debian, dia efa marihina fa ny fampiasana Backports dia mety hanome olana fiankinan-doha. Amin'ny tranga toy izany, ny famerenana sy famerenana ny fonosana avy amin'ny tahiry ofisialy, voavaha ny olana.
Mpisolovava an'i Devoly, nanao ny raharaha tamin'ny lahatsoratra aho: manana solosaina finday miaraka amin'ny NVidia Optimus, teknolojia izay tohanan'ny Wheezy-backports fotsiny aho (ny bumblebee dia tsy milamina ary ny kernel 3.2 dia tsy manao fifanakalozana sary, izay nampiharina aoriana. kernel). Tsy apetrako ny seranam-piaramanidina satria tiako izany, fa tsy ilaina, araka ny asehon'ny wiki: https://wiki.debian.org/Bumblebee . Mandritra izany fotoana izany dia tsy tsikaritr'i Jessie ny karatra misy tariby, na amin'ny fametrahana na amin'ny fametrahana ny firmware, izay miasa miaraka amin'i Wheezy. Ka tafahitsoka amin'ny seranam-piaramanidina aho.
Fa ny dikany ankapobeny amin'ny lahatsoratra dia i Debian, raha ny hevitro foana, dia mandany vola izay azony ampiasaina any an-kafa. Mihevitra ianao fa ny fiorenanana dia tsy misy fiatraikany aminao; Eny, nanana bibikely ratsy tarehy natsangana niaraka tamin'i Wheezy aho (tsy nisy seranam-piaramanidina) izay tsy nijaly tamin'i Squeeze (maneho hevitra momba azy ireo aho ao amin'ilay lahatsoratra, ary na dia tsy bug aza io dia misy ihany koa ny fampamonoana ny gstreamer ho an'ny Iceweasel satria eny ), Efa notateriko izy ireo ary tsy misy te hahalala na inona na inona. Fa maninona Angamba satria miangona tsy ilaina ny asa. Ny tenanao manokana dia milaza fa ny backports dia tsy tsara ho an'ny be loatra, eny, nanala ny sampana i Debian, noho izany ireo mpampiasa dia hanana olana kely kokoa sy fotoana bebe kokoa hanatsarana ireo rantsana manan-danja. Ary ho azoko tsara fa mbola tsy afaka manohana ny fitaovako i Debian satria tsy afaka nametraka azy io aho na i Wheezy na i Jessie, nilavo lefona fotsiny aho fa tsy voatery nanala ilay distro.
Tsy manafika an'i Debian aho hanome endrika ratsy azy io, fa raha hizaha raha mitendry ny valiha, dia fantatry ny mpamorona sasany ny olan'ny fananana rantsana marobe ary mampiakatra ity karazan-javatra ity amin'ny komitin'ny fifanakalozan-kevitra.
Heveriko fa marina avokoa ireo fanehoan-kevitra roa ireo:
- 'Devil's Advocate' dia mpampiasa mahazatra manana ny teny filamatra hoe: "raha mandeha izy dia aza kitihina": Lavorary amin'izany i Debian.
- 'OtakuLogan' dia ohatra mazava iray amin'ny antony tsy nananganana an'i Debian hampiasaina be amin'ny birao: raha hampiasa azy io dia miankina amin'ny mpamily video izay tsy tohanana ao amin'ny sampana ofisialy.
Amin'ny lafiny iray dia averiko ihany: tsy misy manome antoka fa ny fonosana "taloha" dia vitsy ny "bug" ary "azo itokisana" kokoa noho ny iray vaovao (jereo ny tranga opensl). Manana fotoana fitsapana bebe kokoa fotsiny ianao, tsy misy hafa. Averiko ihany: mazàna ny fanavaozana dia mitondra fanamboarana bebe kokoa noho ny fiasa vaovao (izany ve no antony maha-"stable" an'i Arch? Hehe).
Ary farany, ny fametrahana an'i Mascherano ho mandroso (tsy tadidiko ny fahitako azy nahatratra tanjona maro), ny fananana an'i Messi, Higuaín, Aguero ary Di María, ary indrindra fa ny tsy fahampiany izay mahatonga antsika any aoriana, dia tena adala.
Toy izany ihany, samy manatanteraka ny asany ny tsirairay. Ka raha mampiasa izay tsy mandeha amin'ny tsy tokony izy isika dia heveriko fa tsy tokony hitomany sy handray ny andraikitsika isika.
Salama Morpheus, andao jerena ... teo aloha ianao nilaza fa tsy mety amin'ny fampiasana isan'andro eo amin'ny birao i Debian Stable, ary fankasitrahana mahery vaika loatra izany raha ny hevitro.
Rehefa mahafeno ireo fanambarana ireo ianao dia manaiky marimaritra iraisana aho ary manampy iray hafa, izay raha ny fahitako azy no zava-dehibe indrindra. Raha manana PC efa lany andro ianao, (izany no tranga misy ahy), Debian Stable dia mety ho tsara kokoa aminao noho ny fitsapana, ary azo antoka Arch.
Ny fahamendrehana dia azo antoka amin'ny alàlan'ny zava-misy tsy azo iadian-kevitra fa ireo fonosana ireo dia napetraka efa an-taonany maro, amin'ny milina an'arivony misy fitaovana maro karazana, ary ireo bibikely dia namboarina ad nauseam alohan'ny nifindrany tany amin'ny sampana miorina.
Ny olana dia izao, miaraka amin'ireo fitaovana vaovao, maoderina kokoa, misy bibikely vaovao, ary mazava ho azy fa miseho ireo karazana olana lazainao ireo. Raha ny hevitro, Debian dia natao ho an'ny mpizara mazava ho azy, nefa koa, ho an'ny tontolo iainana izay tena mila tsy hahomby mihitsy ary mila mampiasa fitaovana izay tsy havaozina lava.
Amin'ireto toerana ireto dia safidy tsara ho an'ny biraonao i Debian, noho izany tsy nanaiky ireo fanambaranao navoitra aho.
Ny zavatra niainako, araka ny nolazaiko teo aloha, dia izaho, nandritra izay taona maro izay, dia nanana bibikely 0, ary tamin'ny PC-ko afaka miasa aho, mijery horonantsary sns. Midika izany fa tsy manana sakantsakana amin'ny fampiasana solosaina isan'andro sy matihanina aho.
Manazava ihany koa aho fa tsy mametraka rindrambaiko velively izay tsy avy amin'ny repo ofisialy na ny backports ofisialy ho an'ny rindranasa manokana.
Izany no ilazako azy satria maro ny olona no mitsara ny fahamarinan'i Debian manana Ubuntu PPA azo alefa, na backport tsy ofisialy marobe toa ireo avy amin'ny sisiny.
Mino koa aho fa ny banga amin'ny fampiasana programa dia tsy azo afangaro amin'ny fahalemena izay hita rehefa mandeha ny fotoana ary misy fiatraikany amin'ny fizarana GNU / Linux rehetra.
Debian stable dia mahazo vaovao farany amin'ny fandriam-pahalemana ara-potoana, ary ny raharaha Openssl dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahanterana fonosana.
Averiko ihany, i Debian dia mitazona ny fonosany araka izay tratra ary amin'ny tranga maro dia haingana kokoa ny fiatraikany noho ny fizarana hafa, toy ity ohatra ity:
Ary mba hanazavana ny tiako holazaina amin'ilay fanoharana momba ny baolina kitra, tao amin'ny ekipako sy teo amin'ny sahaniko, (ny zavatra ilaiko sy ny kojakojanay efa lany andro), tsy azoko atao ny mametraka an'i Higuaín ho mandroso, satria tsy nilavo lefona izy.
Etsy ankilany, Mascherano, na dia tsy nandroso aza, dia nahatratra tanjona betsaka ho ahy toa an'i Higuaín ary izany no zava-dehibe amiko.
Raha fintinina, ny zava-dehibe dia ny fandresen'i Arzantina ny Tompondaka Erantany, na dia tsy maintsy tafiditr'i Sabella aza ny tanjona. (Etsy andanin'izany, gamer mahafinaritra, tsara endrika rehefa mavitrika izy)
Salama OtakuLogan, andao jerena, heveriko fa tsara ny fitsikaranao an'i Debian, tsy izaho no hiteny hoe i Debian no tsara indrindra manerantany ary amin'ny tranga rehetra. (Raha ny marina dia tsy nilaza izany momba ny fizarana aho, na saika na inona na inona). Ny safidy rehetra dia misy ny mahatsara sy maharatsy azy.)
Fanitsiana roa ihany, satria ny ankamaroan'ny hevitro dia efa miharihary amin'ireo fanehoan-kevitra manaraka.
Tsy nilaza aho fa tsy dia ampiasaina loatra ny Backports, milaza fotsiny aho fa manana fampiharana amin'ny kinova farany izy ireo, ary nitsikera fa nomena ny fahatsapana fa ilaina ny Backports.
Mazava ho azy fa ho anao izy ireo, saingy tsy azoko ny teninao hanafoanana azy ireo. Ho an'ny olona maro dia tena ilain'izy ireo izy ireo, ary satria indrisy fa tsy mahavaha ny olanao ho anao izy ireo dia tsy hanelingelina ireo mpampiasa hafa izahay, sa tsy izany?
Ary ny fanitsiana faharoa dia ny, mba hitsikerana marimarina kokoa, tsy maintsy soratanao tsara ny fomba fiasan'i Debian sy ny sampana misy azy ary repository fotsiny izy ireo. Eny, raha ny hevitro dia diso be ianao ao amin'ilay lahatsoratra. Salama.
Raha miteraka olana ny seranam-piaramanidina, maninona no entina any amin'ny mpizara ofisialy? Amin'ny fanesorana azy ireo dia tiako holazaina fa mijanona ho "mivoaka" izy ireo, toy ny teo aloha: Tsy hitaraina aho raha manome olana ny deb-multimedia, fa raha ataoko amin'ny seranam-piaramanidina satria anisan'ny mpizara an'i Debian. Amin'ny lafiny iray dia miteny amiko ianao fa tsy anisan'ny sampana ofisialin'i Debian izy ireo, fa amin'ny lafiny iray kosa dia ampidirin'i Debian amin'ny karoka fonosiny izy io ary ny wiki dia manondro azy. Toa tsy mety amiko izany.
Heveriko fa fantatro ny fomba fiasan'i Debian. Heveriko fa tsara fa tsy tianao ny mampiditra backports, andrana, na oldstable ho sampana misy ny backports sy ny lt. Izaho manokana dia mahatakatra fa sampana samy hafa izy ireo satria raha mametraka fonosana backports ianao dia havaozina ireo fonosana ireo (ho fiarovana, ho an'ny kinova vaovao) avy any amin'ny seranam-piaramanidina, fa tsy avy amin'ny stable. Avy eo, ho ahy dia sampana vaovao izy; miankina tanteraka amin'ny stable, fa loharano binariera vaovao miaraka amin'ny mifanentana eo amin'ny fonosanao, rehefa dinihina tokoa.
Andao, tsara kokoa ny mampiasa Centos / RHEL satria izy ireo farafaharatsiny mamerina ny fonosana na dia mitazona isa mitovy aza izy ireo .. 😀
Marina indrindra. Amin'ny rafitra famokarana, tsy afaka manavao isan'andro ianao.
Tsara, saingy ny tanjoko voalohany niaraka tamin'i Debian dia ny hanana distro izay tsy afaka manavao afa-tsy izay ilaina ary tsy misy zavatra hafa, ary avy eo, rehefa nahita fa nanjary mpanjifa bebe kokoa aho niaraka tamin'ny lalao multimedia sy horonan-tsary, dia nankany amin'ny Testing aho.
Ho an'ny mpizara, Debian dia tsara eo akaikin'ny Slackware sy CentOS.
Mpampiasa Debe Testing KDE aho, saingy heveriko fa tsy maintsy misafidy distro hafa aho.
Mamaky zavatra misy dikany betsaka aho.
Te-hanazava zavatra vitsivitsy momba ny fanamarihana aho:
Ny andrana 1 dia tsy sampana fa fitahirizana http://es.wikipedia.org/wiki/Debian https://www.debian.org/releases/index.es.html
2 sid dia natao ho an'ny mpamorona, ity kinova ity, raha ny marina, dia tsy atolotra ho an'ny besinimaro satria tsy misy debian sid installer, ny hany tokana fantatro dia ny debian hurd installer, saingy tsy maintsy hazavaina fa mbola tsy tonga i hurd dia ao anatin'ny maritrano debian ofisialy
Ny fanandramana 3 dia ny kinova andrana, natao izy io mba hahafahan'ny mpampiasa mijery topy maso ilay tranon'omby vaovao, ary afaka miara-miasa amin'ny alàlan'ny fanaovana tatitra ny bibikely
4 Na dia marina aza fa ny tahiry backports dia nampidirina tao amin'ny lisitry ny tahiry izay azon'ny olona ampiana miaraka amin'ny mpampiditra debian miaraka amin'ny wheezy. Marihina fa raha hametraka fonosana any aoriana ianao dia tsy maintsy mampiasa ny baiko apt-get install-wheezy-backports package
5 amin'ny lohahevitry ny tatitra momba ny bibikely, tsy matetika fa indraindray misy fotoana itehirizana bug ao anaty fonosana mandritra ny fotoana maharitra ary mety maro be ny antony. Anisan'ireny ny kamboty efa kamboty. Ny bug dia tsy avy amin'ny fonosana voalaza fa avy amin'ny fonosana hafa.
Marihina fa rehefa misy bibikely voalaza ao amin'ny Debian, dia tsy maintsy apetrakao ny lanjan'ny tatitra, ireo izay raisina am-pahamendrehana dia ireo voalohany izay tsaboina, ary koa ireo izay manana tatitra marobe. Raha ny zavatra niainako dia azo atao kokoa ny mamorona tatitra vaovao toy izay miditra amin'ny tatitra efa vita, na dia mety ho fanamby aza isika amin'ny fanaovana an'io, dia toy izany koa raha mitsikera zavatra kely isika.
Repository 6 backports, ny fonosany dia tsy notsapaina tamin'ny hamafin'ny tranon'omby, nalaina avy amin'ny kinova fitsapana ary natambatra ho marin-toerana, fa atahorana tsy hifanaraka ka izany no atahorana ho tanterahina.
"Ny seranam-piaramanidina dia tsy azo hosedraina betsaka tahaka ny tranon'omby Debian, ary ny seranam-piaramanidina dia omena araka ny tokony ho izy, mety ahiana tsy hifanaraka amin'ireo singa hafa ao amin'ny tranon'omby Debian. Mampiasà fitandremana! "
Imbetsaka isika no mahita fa any amin'ny seranam-piaramanidina fonosana iray manjavona na tsy mandray ireo fanavaozana azony ao amin'ireo trano fitahirizana andrana, dia mety noho ny tatitra momba ny tsy fahombiazana na bibikely izay tsy tohanana ho an'ny sampana marin-toerana
Saingy tsy ny seranam-piaramanidina irery ihany no vahaolana manana programa hafa manana rindrambaiko maoderina kokoa noho ny sampan'ny debian izay misy antsika. Ka safidy tsara indrindra ho an'ny seranam-piaramanidina no apt-pinning https://wiki.debian.org/AptPreferences
7 momba ny habetsaky ny rindranasa sy ny maritrano tohana dia manaitra ny famakiana izay nosoratanao ary manome ahy ny tondrozotra izay ampahany amin'ny lahatsoratrao.
Raha tokony hankasitraka ny ezaka lehibe nataon'ny vondron'ny mpamorona sy ny mpikirakira ny fanaovana debian ho rafitra miasa manerantany ianao dia raisinao ho fihenan-danja satria ny hany zava-dehibe aminao dia ny famahana ny "bug" anao (amin'izao fotoana izao dia efa tsy fantatrao raha olana izany na ilay zazakely fanindroany maniry ny hahatonga ny zavatra rehetra ho lafatra amin'ny tsindry roa)
8 amin'ny olan'ny tsy fisian'ny fanohanana ireo horonantsary html5 amin'ny debian wheezy izay fanendrikendrehana tanteraka, tsy marina.
Mpampiasa maro no manomboka mametraka programa ary avy eo rehefa tsy mandeha ny raharaha dia hadisoan'ny distro izany
9 Debian dia notazonin'ny vondrom-piarahamonina, izy io dia iray amin'ireo disko misy be forks indrindra, anisan'izany ny tena fantatra dia ny Ubuntu, saingy ankoatran'ny vitsivitsy maningana, tsy misy na iza na iza amin'izy ireo miverina amin'i Debian izay alaina aminy, manome anjara biriky amin'ny olona amin'ny fikojakojana ireo fonosana. Tsy fahadisoan'i Debian anefa izany
Raha i Debian no distro tranainy indrindra ary mitazona fironana hitombo isa, tsy heveriko fa olona marobe, mihoatra ny 20 taona, no manao fahadisoana betsaka, tsy izany ve ny olana aminao?
Ny vazivazy dia ny tsy fandraisan'ny olona ny kaonty 8, ka na dia miely ho an'ny maro aza izy io dia tsy maintsy dinihina fa farafaharatsiny mba manana baiko tsara noho ny Ubuntu ireo repo Debian. Ary farafaharatsiny farafaharatsiny, fantaro fa afaka manome tsiro ratsy anao amin'ny vavanao i Debian rehefa tena manana fitaovana fampiasa ivelany (ahem: modem USB Huawei E173).
Etsy ankilany, ny zavatra voalohany ataoko rehefa mahazo bug dia ny google /gana adiny roa tsara dia azo antoka fa tsy sosona 8. Raha toa ka bug 8 ny bibikely, dia tsy ratsy ny olana; raha tsy izany dia mitatitra ny bug fotsiny aho.
Zavatra iray hafa: azo itokisana kokoa ny seranam-piaramanidina Debian noho ny Launchpad PPAs sy ny Arch Linux AURs (Nampiasa Launchpad PPAs aho toy ny hoe Backports ao amin'ny Debian Squeeze izy ireo). Na iza na iza manararaotra azy ireo dia mora manome ny distro tsy misy ilana azy, na mafy toy inona aza izy ireo te-hihazakazaka ny fampiharana tiany.
Ary toy ny hoe tsy ampy izany, ny netbook-ko dia tsy manova an'i Debian Wheezy na inona na inona manerantany, satria ny distro no mamonjy ahy bateria isaky ny mampiasa azy aho, ary aleoko tsy miatrika risika amin'izy ireo, satria miaraka amin'ny ilay PC izay anaovako asa vonjy maika.
Miala tsiny, azoko tsara fa manaiky ny fomba fijeriko na tsia ianao, fa miresaka ny fanalam-baraka ny teboka faha-8. Manana gstreamer amin'ny Iceweasel eo amin'ny sampana misy anao ve ianao? Ataoko izany satria tsy miteny aho. Tsy hoe tsy mandeha izy fa voaangona tsy misy fanohanan'ny gstreamer. Efa niditra tamin'ny rohy manazava azy aminao ve ianao, ao amin'ny changelog ao anaty fonosana? Napetrakao ao anaty bara ve ny "abouit: config" ary nitady ny "gstreamer", safidy iray izay miseho ao Icedove? Tianao ve aho handefa horonan-tsary amin'ny Youtube ho hitanao? Sa mampakatra iray izay ahitanao fa manana gstreamer ao amin'ny Iceweasel 24.5 ianao nefa tsy manangona? Fanajana kely kokoa, azafady.
Tsy ny olana ny fanekena na ny tsy fitovian-kevitra, fa ny filazanao hevitra maro (ny tena miharihary dia ny fanakorontanana ireo sampana amin'ny trano fitehirizana) ary mifototra amin'ny olanao manokana dia heverinao fa ankapobeny izany rehefa tsy
Hoy ny mpanoratra: «… Manampy ireo mpandraharaha ho leo sy kivy bebe kokoa amin'ny olana izany: efa nitatitra bibikely folo aho hatramin'izao ary efa nitranga tamiko toy ny… in-folo. Angamba ny tena nahasosotra dia rehefa nanapa-kevitra ny ekipa mpiambina fa hanao laharam-pahamehana ny sampana fitiliana ary manaisotra ny fanohanana ny gstreamer amin'ny sampana miorina. Hatramin'izao dia tsy afaka milalao horonan-tsary amin'ny html5 ao Iceweasel aho, manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso, noho ny fanavaozana ny fiarovana izay tsy misy ifandraisany amin'ny gstreamer. Ary nitranga tamiko indray izany, indroa…. »
Milaza aho fa tsy marina izany, na izany na tsy izany olana izany dia ho olana nanjo anao tamin'ny maha-zazavavikely anao ary omenao azy io ho an'ny iceweasel ho an'ny debian na ho gstreamer satria ny tena izy dia azo lalaovina tsara ireo horonantsary webm. raha te hilalao horonantsary h.264 tsara ianao ao dia tsy maintsy apetrakao ny deb-multimedia.org na vlc repo ary ny paozy ho an'ny browser browser-plugin-vlc
ity misy santionany amin'ny fomba ahafahanao milalao horonantsary html5 avy amin'ny youtube miaraka amin'ny iceweasel
momba ilay lohahevitra hoe tsy mandray ny wifi mmmm i jessi… .. azonao atao ve ny manamarina ny mametraka azy avy amin'ny installer miaraka amin'ny firmware tsy maimaim-poana http://www.esdebian.org/wiki/enlaces-directos-descargar-imagenes-iso-debian
PS: Mangataka fanampiana aminao aho, atsaharo ny fampifangaroana ireo sampana amin'ny trano fitahirizana
Izany dia satria i Debian dia manana repos lehibe telo farafaharatsiny farafaharatsiny, raha mora averina indroa na intelo kosa i Ubuntu amin'ny repos ofisialy 3 (fa tsy ny LTS ihany), repos 4 LTS, repo marim-pototra, ary 2 fotsiny no manandramana repo (tsy manana mitovy amin'ny repo akory izy ireo. mankany amin'i Debian SID).
Hitako fa marina fa azo lalaovina ireo horonantsary html5, fa tsy h.264. Saingy mbola tsy misy mpanohana an'i Gstreamer: https://imageshack.com/i/mv6c5yp , ary izao no tokony hatao http://3.bp.blogspot.com/-70qQer3-PZs/UkZasbhlmQI/AAAAAAAAAUM/JUOvE5GQQUQ/s1600/firefoxConfig1b.png .
Tsy maintsy mampiasa repository tsy ofisialy toy ny deb-multimedia aho izao rehefa maro ny fanehoan-kevitra (toa ny anao) milaza amiko fa hadisoako ny fampifangaroana ny stable sy ny backports (ary ny seranam-piaramanidina dia eo amin'ny mpizara ofisialy)? Ao amin'ny Iceweasel 24.5 dia milamina ny zava-drehetra; raha ny marina, Icedove dia tonga tsy misy fotony miaraka amin'ny fanohanan'ny gstreamer: https://imageshack.com/i/mu26zcp . Mbola ao anatin'ny telo ambin'ny folo taona aho, nahoana ny fanavaozana ny fiarovana izay tsy misy ifandraisany amin'ny gstreamer no mamono azy io ho azo antoka ary mampandeha azy io ho fizahan-toetra? Miala tsiny, mbola tsy hitako ny hevitra.
Mikasika ny fametrahana Jessie, eny, napetrako ny firmware, napetrak'i Wheezy toy izao. Raha ny marina dia vitako ny fametrahana netinstall raha tsy miasa ho ahy ny tamba-jotra ary avy eo miaraka amin'ny rafitra fototra, nametraka ny firmware aho tamin'ny tanana, raha toa ka zavatra avy amin'ny installer io. Tsy mandeha izy; na amin'ny fametrahana ny fitahirizam-boky ao / usr / lib. Any ho any izy ireo dia milaza fa tsy maintsy manova ny filaharan'ny fametrahana ny rakitra tsirairay ianao; sarotra loatra, satria tsy afaka miditra amin'ny Internet aho rehefa manandrana.
Na izany na tsy izany dia heveriko fa tsara fa ho anao dia tsy manana olana i Debian, ho ahy izany ary tiako ny hanovanao azy ireo mba hahafahako mankafy bebe kokoa ny distro-ko.
Manana Firefox sy Iceweasel miaraka amin'i Debian ve ianao? Raha toa izany (ary samy kinova ESR), dia niditra ara-bakiteny avokoa ianao efatra, satria ny kinova ESR dia tsy azo alefa amin'ny toerana misy anao ao amin'ny asan'ny GStreamer, noho izany dia kitihoo tsara ny sanda "diso", safidio Manova, ary ampandehanana (raha sanatria, hamerenana ny Firefox mba hahomby).
Ary rahoviana, samy Firefox sy Iceweasel (ny sampana famoahana) dia efa samy manana ny fanohanan'ny GStreamer, noho izany dia tsy ilaina ny mampihetsika azy amin'ny tanana.
Ary teny an-dalana, ity ny pikantsary momba ahy About: config avy amin'ny Iceweasel 30 ao amin'ny Debian Jessie (raha mampiasa Wheezy ianao dia ampiasao ny backports avy any Debian-Mozilla, tsy misy intsony):
Miala tsiny, adinoko fa ny fanehoan-kevitra dia tsy manohana kaody HTML hampidirina sary.
Avelako eto ianao ny pikantsary momba ny Iceweasel 30 miaraka amin'i GStreamer dia niasa.
PS: apetraho ireo codec libav raha sanatria tsy mandeha aminao ilay GStreamer navadika.
Tsia, elliotime3000, io fotsiny no nolazaiko: ny ekipa fiarovana dia nanidy ny fanakambanana niaraka tamin'ny gstreamer. Izany hoe mandeha mankany amin'ny: config ianao ary mitady gstreamer ary tsy misy valiny (amin'ny Icedove eny), toy ny fisamborana napetrako etsy ambony. Ao amin'ny kinova 24.5 dia afaka nanao izany izy, miaraka amin'ny kinova vaovao 24.6 tsy, vakio ny changelog.
Miaraka amin'ny kinova 30 azonao atao ny mivezivezy, saingy tsy tiako ny mampiasa tahiry ofisialy semi-ofisialy, efa mamaky ianao fa rehefa misy zavatra tsy mahomby dia hanome tsiny ahy izy ireo noho ny tsy fampiasako ireo sampana ofisialy.
Rehefa hitako fa voafafa ilay fanehoan-kevitra, dia averiko indray fa tsy manombana ny tombana tombana
napetraky ny mpanoratra ny hoe «… Manampy ireo mpandraharaha ho leo sy kivy bebe kokoa amin'ny olana izany: boka folo no notateriko androany ary efa nitranga tamiko toy ny… in-folo izy ireo. Angamba ny tena nahasosotra indrindra dia ny nanapa-kevitra ny ekipa mpiaro ny laharam-pahamehana ny sampana fanandramana ary nanala ny fanohanan'ny gstreamer avy amin'ny sampana miorina. Hatramin'izao dia tsy afaka milalao horonan-tsary amin'ny html5 ao Iceweasel aho, manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso, noho ny fanavaozana ny fiarovana izay tsy misy ifandraisany amin'ny gstreamer. Ary nitranga tamiko indray izany, indroa…. »
ny olana dia afaka milalao horonantsary html5 mora foana ianao miaraka amina codec maimaimpoana, noho izany dia heveriko fa manana fifandirana amin'ny fametrahana programa tsy misy fifehezana ianao ary azo antoka fa mifandraika amin'ilay mpamily horonan-tsary ary manome tsiny ny ideweasel, debian sns ianao.
eto aho dia mampiseho horonantsary ahafahanao mankasitraka tanteraka ny fomba filalaovanao horonantsary html5 avy amin'ny youtube miaraka amin'i iceweasel 24 amin'ny debian weheezy
amin'ny lohahevitry ny olan'ny wifi ao amin'i debian jessie dia azonao atao ny manandrana mametraka azy amin'ny alàlan'ny sary netinstall miaraka amin'ny firmware tsy maimaim-poana
eto no hahitanao ireo rohy http://www.esdebian.org/wiki/enlaces-directos-descargar-imagenes-iso-debian
Ao amin'ny tranokala Backports  milaza mazava (ny dikanteniko):
> Ireo seranam-piaramanidina dia tsy sedraina betsaka tahaka ny tranon'i Debian, ary
> atolotra ny "backports" tahaka ny "backports, atahorana tsy hifanaraka
> miaraka amin'ireo singa hafa ao amin'ny tranon'omby Debian. Ampiasao am-pitandremana.
> Noho izany dia ampirisihina hifantina tsirairay ireo fonosana
> backports arak'izay ilaina fa tsy ny backports rehetra misy.
Na eo aza io voalaza etsy ambony io, ny tanjona dia mikendry ny hampita ilay fahatsapana fa
Rava i Debian noho ny sampana ofisialy tafahoatra (mitsara ny
lohateny), raha ny olana dia mamela ny Backports ianao.
Fanitarana fotsiny ity lahatsoratra ity, tsy mba hanasongadinana ny fomba
manintona. Mazava ho azy fa hitanao fa manana olana amin'ny Backports izy.
Isika rehetra izay nampiasa an'i Debian nandritra ny fotoana ela (raha izaho 10 taona) dia mahalala tsara izay atao hoe backports sy ny andrana ary ny sampana; izay tsy midika hoe tsy takatsika ny olana mahazo an'i Debian amin'ny fitazonana ny maritrano noscuantas, ny voany noscuantos, ny fonosana noscuantos isaky ny maritrano, raha fintinina, ny Rafitra miasa manerantany, dia mifarana amin'ny faharetan'ny olona.
Marina fa ny fikatsahana izao tontolo izao dia mahatonga ny fikolokoloana ho sarotra kokoa, saingy io indrindra no tanjon'ny Debian ary asa lehibe hatreto no vita, ny fizarana dia lasa lavitra, miaraka amin'ny fotodrafitrasa tena avo lenta sy tena tsara. Vokatr'izany dia lasa tsy misy dikany intsony ny firesahana raha manana rafitsoa be loatra i Debian na tsia. Mikasika ireo sampana, ny fitantanana ireo sampana lehibe 4 no ahafahana miasa ao Debian nefa tsy manapotika ny sampana miorina. Ny hany zavatra aseho amin'ny hevitra dia ny tsy fahalalana ny fizarana. Mazava ho azy fa ampitomboin'ny NxM io, saingy misy automatisation be dia be ao anatin'ny fampandrosoana Debian izay manamora ny fikirakirana azy. Noho io antony io sy antony hafa dia tsy marim-pototra ny hevitry ny OP. Ny lafy ratsy dia ireo lesoka ireo no mifanohana ary manome ny fiheverana fa hevitra marina io.
Raha ny hevitry ny OP, ny hevi-dehibe dia ny fanohanan'ny teknolojia iray izay tsy vitan'ny mpamatsy entana ny famoahana ny famaritana na ny mpamily misokatra, fa ny fanohanana Linux ny teknolojia voalaza dia navoakan'ny mpivarotra 1 andro monja talohan'izay. ny famotsorana an'i Debian Wheezy sy 3 taona taorian'ny fanambarana ofisialy . Ankoatr'izay, ny fanohanan'ny mpamily fananana dia ampahany ary manome ihany ny hiasa miaraka amin'ireo karatra roa navitrika , izay mifanitsy amin'izay atolotry ny sampana marin-toerana (araka ny asehon'ny OP amin'ny iray amin'ireo fanehoan-keviny ).
Etsy an-danin'izany, ny kalitaon'ny fizarana dia tokony hotsarain'ny repository "main" an'ny sampana marin-toerana ihany, satria io ihany no heverina ho "navotsotra tamin'ny fomba ofisialy". Amin'ity teboka ity dia lasa ny olanao rehetra afa-tsy ny nVIDIA Optimus: ny olanao amin'ny VLC dia ao amin'ny Backports, ny karatra tsy misy tariby misy anao dia misy olana amin'ny fitsapana sns.
Tena nanantena aho fa hilaza zavatra momba ny karatra tsy misy tariby ianao, izay mety hamahana sy hamaha ny fiankinan-doha amin'ny Stable + Backports, miampy ny tena hanampianao an'i Jessie alohan'ny hamoahana azy. Momba an'ity lohahevitra ity izay tsy dia resahina loatra: na ny marika, na ny PCI ID, na ny tatitra (raha nisy), na ny famaritana ny olana, na ny fomba famerenana azy ...
Ny olana iray dia miharihary: ny mpampiasa dia mampiasa serivisy sy sampana voangona (Backports, Testing) izay antenainy kalitao izay tsy ananan'izy ireo ary miaraka amin'ny fitaovana izay kely na tsia ny fanohanan'ny mpanamboatra azy.
Ho famaranana, tokony hitaraina momba ny mpanamboatra ny OP fa tsy i Debian. Ny iray amin'ireo fomba fitarainana dia ny fampitsaharana ny fahazoana ny marika.
Ary farany, soso-kevitra ny hidiran'ny OP amin'ny fampandrosoana Debian, manomboka amin'ny fitaterana ny olan'ny karatra tsy misy tariby miaraka amin'ny fampahalalana ampy hamahana izany.
Ny karatra ananako dia Intel Centrino Wireless-N 2230, tsy nitory ny lesoka aho satria rehefa manome hevitra aho dia nitatitra bibikely 10 ary tsy mbola novaliany mihitsy aho. Inona ny lesoka? Mandritra ny fametrahana ny rafitra dia mandingana ny scann'ny tambajotra, na dia manana ny firmware aza ny sary. Aorian'ny fametrahana ny base system sy ny fampiharana ny fametrahana ny firmware dia mijanona ho tsy hita.
Ny NVidia Optimus dia tohanan'ny tetik'asa Bumblebee izay nanomboka talohan'ny taona 2013. Fa raha fonosana vaovao loatra dia misy fomba hanamboarana azy: amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina dia mametraka kernel izay manohana ny haitao izy ireo ary apetany soa aman-tsara. Raha mampiditra kernel vaovao tsy mifanaraka izy ireo, dia tsy misy dikany ny fampiasana backports izay, amin'ny fomba ofisialy, ankehitriny (raha tsy te-hiantoka ny kalitaon'ireo fonosana ireo izy ireo, dia avelao ho tahiry ivelany toy ny Mozilla Team na deb- multimedia, ary tsy nanan-jo hitaraina aho).
Efa elaela aho no tsy nanana fitiavana an'i Debian intsony. Fa tsy haiko izay distro hisafidy. Raha ny marina dia tsy nanandrana an'i Fedora mihitsy aho, fa zavatra mora sy mora no tadiaviko, satria ny hevitro dia ny hahafahana mametraka ny distro izay ampiasako amin'ireo namako nefa tsy mahita olana sarotra hamahana rehefa avelako irery izy ireo (toa sarotra amiko ny Ubuntu rehefa manomboka tsy mahomby)
Ny LTS an'ny Ubuntu dia azo itokisana, na dia tsy misy rafitra tsy misy bug.
Linux Mint dia safidy tsara hanandramana satria tsy diso ny manavao azy io.
Teo aloha 😉
Efa nahita antecedents anarana maromaro aho izay mifototra amin'ny andohalambo. Aleo noho ny manjaro ?? Manantena ny hanandrana ny sasany amin'ireto distro ireto amin'ny masinina virtoaly aho hijerena ny fandehany.
Ny rafitry ny fanavaozana anao dia mihodina tahaka ny andohalambo, na havaozina mifototra amin'ny fonosana fanavaozana toy ny ao manjaro? ho an'ny olan'ny famakiana vaovao farany sy izany.
Izaho dia tao amin'ny fitsapana an'i Debian niaraka tamin'ny kde hatramin'ny andiany 4.4, ary ny tena marina dia vitsy dia vitsy ny olana. Ny hany toerana itahirizako manokana dia ny an'ny Iceweasel, mba hananana kinova vao haingana. Raha ny amin'ny ambiny, izao dia milamina kokoa aho ary tsy manana versionitis. Ho ahy, androany raha toa ka mandeha tsara ny rindranasa sasany, inona no dikan'ny mampifangaro rantsana, mametraka na manangana ny .deb anao sns, mba hanana kinova vao haingana. Marina fa mety misy tranga izay ilantsika an'ity fanavaozana ity, fa ny ankamaroan'ny fotoana raha toa ka niasa ny programa X herinandro vitsivitsy lasa izay dia tsy hijanona izany satria misy kinova vaovao.
Etsy ankilany, azoko fa ny tsirairay dia mampiasa ny sampana tadiaviny, izany no ilana azy, ary ny andiana sampana / fampiharana dia mandray habe be. Ny marina dia, tsy sahy mametraka aho fa ho an'ireo mpamorona, izay manolotra rafitra lehibe ho ahy izay OS lehibe nataoko nandritra ny taona vitsivitsy izao.
Ho an'i Steam dia nifindra tany amin'i Jessie aho, satria niaraka tamin'i Wheezy dia nanana olana tamin'ny ALSA aho rehefa nilalao Half-Life niaraka tamin'ny headphone. Ary ny tsara indrindra, dia naterina niaraka tamin'ny reportbug activated (PRAISE SEAS, DEBIAN !!!).
Ny sampana SID dia marefo amin'ny tenany, amin'ny ambaratonga toy izany mba hijanonana eo amin'ny sisiny manaparitaka dia misafidy ny Arch na Slackware Current aho. Saingy, raha mandeha tsy misy quirks tsy ilaina sy / na versionitis izy ireo, Debian Stable, CentOS / RHEL stable na Slackware stable dia ampy distros handoavana ireo lesoka.
Saingy, raha tena te-hahazo tombony betsaka amin'ny PC ianao, na Gentoo, Linux From Scratch na FreeBSD / OpenBSD. Tondro.
hey inona no nitranga tamin'ny valinteniko izay tsy miseho ?? ¬¬
Amin'ny antonony. Raha mampiasa ny mailaka mahazatra ianao dia alefanao avy hatrany. Na izany aza, raha mampiasa mailaka vaovao ianao, dia hataony antonony izany satria hitany fa mpitsikera vaovao izy io.
milomano dia hoy izy:
[…] Ny raikipohy izay mifanohitra amin'ny fiverenana any aoriana […] ary teo no nijanonako tsy namaky intsony.
Mamaly an'i nader
gru dia hoy izy:
Nampiasako an'i Debian nandritra ny taona maro ary ny marina dia tamin'ny voalohany rehefa nanomboka nampiasa azy io dia somary sarotra ihany saingy androany nahay azy aho ary tsy manome olana amiko izany, faly tokoa aho mandrehitra ny solosaina miaraka amin'ny Debian. Mampiasa ny sampana fitiliana aho ary tsy nanome olana ahy izany. Novakiako fa misy olona sasany manana olana amin'ny fahitana ny wifi, ny hany tokony hataony dia ny mampidina ny mpamily ao aminy http://wireless.kernel.org/en/users/Devices ary napetraky ny mpamily ao anaty / lib / firmware ary raha ny momba ilay mpamily sary dia ampiasaiko nouveau, satria tsy ampiasaiko hilalaovana lalao dia ampy ny miasa sy ny mandeha amin'ny Internet.
Mamaly an'i gru
Rehefa reraky ny filalaovana fampisehoana mahatsiravina ao amin'ny Windows aho noho ny PC manetriketriko dia nanapa-kevitra ny hametraka Steam aho noho ny fahombiazana tsara efa nataoko rehefa nijery horonantsary HD tany Debian mifanohitra amin'ny Windows.
Ary teny an-dalana, alohan'ny handatsahana ny vato voalohany, zahao tsara raha diso ianao noho ny fanampian'i Google ny lesoka.
Salama tsara, tiako ho fantatra ny fomba ahafahako manala ireo kinova taloha amin'ny programa Debian, mampiasa ny kinova fitsapana aho ary nohavaozina imbetsaka ary misy programa, indrindra ireo avy amin'ny rafitra fototra izay tsy nesorina rehefa nohavaozina ary ezahiko jerena raha toa ka kamboty kamboty izy ireo nefa mbola tsy miseho eto dia mamela anao ohatra iray aho izay miresaka amin'ny gcc dia efa nohavaozina imbetsaka amin'ny kinova vaovao fa ny kinova taloha dia mbola napetraka ny rafiko manantena aho fa afaka manampy ahy eto ianao mamela ohatra iray:
faka @ debian: ~ # dpkg –fantina-pifidianana | grp gcc
gcc-4.6-base: amd64 mametraka
gcc-4.7-base: amd64 mametraka
gcc-4.7-base: apetraho i386
gcc-4.8-base: amd64 mametraka
gcc-4.9-base: amd64 mametraka
gcc-4.9-base: apetraho i386
libgcc-4.7-dev: hametraka amd64
libgcc-4.8-dev: hametraka amd64
libgcc-4.9-dev: hametraka amd64
libgcc1: amd64 hametraka
libgcc1: mametraka i386
Araka ny hitanao dia misy kinova maro ary tiako ho fantatra raha tsy ilaina izany ary raha azo esorina mba hamonjy toerana disk.
Tsy afaka manome valiny azo antoka aho, saingy heveriko fa azo esorina izy ireo: manangona ihany koa ny voan-kazo ary esoriko any amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo. Mazava ho azy fa raha manandrana manao izany ianao dia manome marika fonosana lehibe hongotana, foanana.
Misaotra anao mamaly fa manana olana hafa aho ary mandeha miaraka amin'ireo fanavaozana izay vao nohavaoziko i Jessie ary very ny 2,7 ​​gigabytes an'ny kapila mafy tsy fantatro izay nitranga, nampidina ireo fanavaozana fotsiny aho ary very ilay habaka kapila nataoko teo amin'ny 30 fotsiny ireo fanavaozana. mb
Ao an-trano na ao amin'ny ((faka)?
Izaho dia efa nahazo ny olana dia ny fisie log system
Mahita hevitra aho fa ny Debian stable dia atolotra ho an'ny servera sy ny birao fitiliana ihany. Heveriko fa ity fehin-kevitra ity na angamba diso aho, dia nalain'ny mpampiasa ny fotoana, satria raha ny fahitako azy dia ampirisihina hampiasa amin'ny rafitry ny famokarana i Debian stable, ny fanandramana fanomanana ny fampandrosoana maharitra sy tsy marin-toerana, sns ...
Ny zavatra iray hafa dia ny fampiasan'ny mpampiasa ny saintsika hampiasa ireo fonosana rindrambaiko maoderina indrindra, hahazoana miditra amin'ireo fiasa vaovao. Indraindray mety azo hamarinina ny te hiditra amin'ireo endri-javatra ireo, amin'ny fotoana hafa ampiasan'ny olona azy io amin'ny zava-misy tsotra hoe manana ny farany farany. Impiry ianao no nangatahana hametraka ny kinova farany an'ny word processeur ary avy eo hita fa manoratra litera tsotra iray izay azo atao miaraka amin'ny kinovan'ny processeur an'ny taona ny poara. Ary somary mitovy ihany raha miresaka momba ny fitaovana matetika isika, ny mpampiasa dia maniry ny maoderina maoderina hampiasa ny solosaina hanoratana litera.
Mitandrema, hajaina daholo izany rehetra izany, mpampiasa Debian aho hatramin'ny nahitan'i Woody ahy ary hitako fa miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia misy zavatra mety tianao kokoa ny hafa ary ny hafa tsy dia lehibe loatra. Ny fananana fonosana rindrambaiko marobe dia tsara sy ratsy amin'ny fotoana iray, na dia marin-toerana aza dia misy lesoka hita eo.
Avy amin'i Debian aho izay tsy haiko eo amin'ny sehatry ny mpampiasa birao, izay tonga toy ny diamondra henjana ho an'ny birao, tsy misy poloney, manome azy io ho "matihanina" amin'ny ambaratonga sary sy fitaovana. Fantatro fa azonao atao ny manova lohahevitra sns ... fa tonga ny fotoana tokony hanokanan'ny olona azy io, ary rehefa tanora ianao dia ataonao mba hahazoana fahalalana, fa miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia tadiavinao ho vonona daholo ny zava-drehetra.
Holazainao amiko fa misy fizarana hafa mamela ny zavatra ho tsara, toy ny Linux Mint, Ubuntu, sns ..., izay nanandramako azy ireo ary mila milaza aho fa nanatsara be ny traikefan'ny mpampiasa. Fa ho ahy, ny mahita ny fanavaozana ny distro isan'andro dia mamono ahy. Ary amin'ny farany tsy haiko raha ny faniriana foana no hodianao "DEBIAN" foana.
Horonan-taratasy navoakako, miarahaba antsika rehetra ary mirary soa 😉
SirMvM dia hoy izy:
Elaela izay no nitsidihako ny bilaogy, hatramin'ny nanakambana ny #UsemosLinux sy #Desdelinux.
Satria mbola tsy nandray anjara mihitsy aho mikasika ireo hevitra ireo, anio dia hilaza ny hevitro manetry tena momba izany aho.
Mameno izay efa nampitandreman'ny maro momba ny "fiviliana" an'ny sampana noho ny fihoaram-pefy ataon'ny mpamorona, mila manasongadina lohahevitra iray aho fa ny fiviliana amin'ny filozofia Debian, izay mifototra amin'ny eritreritry ny kolontsaina afaka iray izay afaka mandray anjara sy maneho hevitra daholo. Amin'ny tsy faniriana avela hialana amin'ny fifaninanana sy ny fandrosoana mankany amin'ny fahatsapana mpampiasa: Izay maniry ny zavatra rehetra ho vonona nefa tsy manandratra rantsantanana akory, nefa tsy mahatakatra ny antony anovana ny zavatra ary inona no azo atao raha ovaina.
Raha ny fahitako azy dia mitodika tanteraka amin'ity mpampiasa ity i Debian, tsy mamela toerana ho an'ireo mpampiasa Debian mahatoky izay niaraka taminy efa ela.
Valiny amin'i SirMvM
Amin'ny lafiny iray, toa tsara amiko ny manandrana manintona olona tsy manam-pahalalana izy ireo, indraindray tena kilema ho an'ny GNU / Linux izany, satria misy olona tsy te handany fotoana mitady vaovao.
Saingy fiverenana ihany koa io nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra io: tsy azonao atao ny mandrakotra ny zava-drehetra, satria ny fanitarana ny faharetan'ny lts dia mandeha amin'ny lalana hafa. Ary eo ihany koa ny Ubuntu sy ny forongony hanamorana izany ho an'ireo mpampiasa tsy manana traikefa.
hafaliana dia hoy izy:
Ny hevitro nefa tsy manana fahalalana be momba ny debian / linux dia ireto manaraka ireto:
Raha manana pc farany ianao (avy amin'ny nvidia optimus dia azoko fa marina izany) ny dikan-tenin'ny debian dia tsy handeha tsara rehefa mampiasa kernel / mpamily taloha raha tsy mampiasa ny kinova backports ianao, zavatra izay ahafahan'ny rafitra mihodina ary / na tsy misy fanavaozana fiarovana sasantsasany (rehefa mampiasa ny seranam-piaramanidina ho an'ny kernel sns).
Mamaly an'i Euphoria
Xiep dia hoy izy:
Hafahafa ny mahita an'i Wheezy ny karatra tsy misy tariby ary tsy hitan'i Jessie.
Efa nanandrana an'ity ve ianao?
sudo apt-mahazo mametraka firmware-iwlwifi
Karatra inona marina? Manoro hevitra ny Forum momba ny mpampiasa esDebian sy Debian aho hamaha azy. Ary, araka ny nolazain'izy ireo tetsy ambony, jereo ihany koa ity tranonkala ity:
Na dia matahotra aza aho fa ity famoahana lahatsoratra ity dia misy famakiana satiety sy fahadisoam-panantenana miaraka amin'i Debian indray noho ny hadalàny. Milaza ianao fa tsy tianao ny hanomezanay distro hafa, ka tsy afaka milaza aminao aho hoe miadia. Miaraka amin'i Debian sy ny fitaovana vaovao dia voatery vonona foana ny hirona amin'ny rafitra ianao ary hivezivezy amin'ireo forum fanampiana. Indraindray tsy eo noho eo ny vahaolana. Saingy tsy ny fandosiran'i Debian ity, hatrizay.
Na izany na tsy izany: efa nanandrana Xubuntu ve ianao? Mety ho ny tsara indrindra amin'ny zavatra ilainao io… Ny Nvdidas dia tsy laharam-pahamehana amin'i Debian.
Etsy ankilany (ary mamaly ny adihevitra hafa izay mipoitra ao amin'ny fanehoan-kevitra), mpampiasa birao aho ary mampiasa Debian amin'ny endriny marimaritra iraisana foana aho: tsy marina izany fa safidy ratsy ho an'ny fampiasana isan'andro eo amin'ny birao. Ireo programa dia tsy "efa" lany andro araka ny voalaza (misy ny fironana hanambatra ireo olana ireo). Raha ny tena izy dia manao izay tokony hataony izy ireo (raha misy olona tsy afaka miaina tsy misy volomaso Thunar azoko, fa andao koa tsy hanao tantara an-tsehatra, huh?). Na izany na tsy izany! mandeha amin'ny tsiro sy fahitana izany. Ary koa amin'ny taona, fa olana hafa koa izany.
Noheveriko foana fa i Debian (na dia asakasaka aza), mba hampitoniana ireo tsy manam-paharetana, dia tokony hisafidy programa vaovao tsara hanampiana azy ireo amin'ny "fepetra" ho an'ny Backports (programa izay mbola tsy teo amin'ny toeran'ny tranon'omby) sy hevero ny mitovy amin'ireo kinova vaovao amin'ny tontolon'ny birao sy ny programa lehibe (LibreOffice, Clementine, Icedove ...). Ity dia ho be mpitia, nefa koa handany vola be amin'ny ezaka ho an'ny mpamorona, izay indrindra no apetrakao am-panontaniana amin'ny famakafakana.
Tsy avy ny orana amin'izay ankafizin'ny rehetra!
Valiny tamin'i Xiep
Eny, rehefa nanandrana an'i Jessie aho dia nametraka izany fonosana izany, niaraka tamin'ny firmware-realtek. Manana Intel Centrino Wireless-N 2230. Mety ho izao ny olako: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=734976 . Saingy mampifandray olana iray tena lava sy tena ara-teknika izy ireo, ary amin'ny farany dia omeny araka ny fandaminana izany. Tsy haiko raha nampakatra an'io patch io i Debian na tsia… Hiezaka ny hametraka indray aho rehefa manam-potoana.
Etsy ankilany, momba ny disto hafa, efa naneho hevitra aho fa na dia mitsikera an'i Debian aza aho dia aleoko. Xubuntu tsy ratsy mihitsy, fa amin'ny fotoana fampiasana azy dia manomboka miseho ny lesoka izay tsy azoko. Ohatra, ny olana mahazo ahy ankehitriny ao amin'ny Debian Wheezy miaraka amin'i tumbler izay niaretako tao amin'ny Xubuntu 12 (tsy tadidiko na .04 na .10), fa avy eo tsy hitako ny fomba hanamboarana azy. Rehefa mametraka an'i Debian madio amin'ny netinstall aho, raha mety mahita ny lesoka ary na dia tsy nahavaha azy aza izany, ahenao kely izany.
Angamba toa ratsy ilay lahatsoratra, fa tsy kivy aho, 🙂.
Amin'ny lohahevitry ny Intel Centrino Wireless-N 2230, azonao atao ny manamarina amin'ity iso ity izay mitondra firmware-iwlwifi koa fa alpha1 (izay midika fa mandray ny dingana voalohany hametrahana azy i jessie) http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/jessie_di_alpha_1/amd64/iso-cd/
Miaraka amin'ireo kinova taorian'ny alpha dia tsy nety tamiko, fa hiezaka ihany aho, 🙂.
Ok, voasedra tsara amin'ny alfa: tsy mandeha izy.
Rehefa nandalo fitsapana i Wheezy dia nisy ihany koa ny olana sasany tamin'ny firmware (wifi usb izay niasako indraindray, tapaka izany indraindray) dia novahan'izy ireo fotoana fohy talohan'ny nahatonga azy io nilamina. Heveriko fa iray ihany izao, hieritreritra ny hanamboatra ireo karazana olana ireo izy ireo rehefa mihamangatsiaka ny sampana, mba hahazoana antoka fa manamboatra azy ireo indray mandeha fotsiny fa tsy maromaro ary miaraka amin'ireo voam-bary hivoaka miaraka amin'i Jessie.
Edward Medina dia hoy izy:
Misy andian-teny milaza hoe: Jack an'ny varotra rehetra, tompon'ny tsy misy, ary avy amin'ny hevitrao dia toa izany no nanjo an'i Debian.
Ny marina dia tsy tiako mihitsy io fizarana io ho toy ny birao, ny kinova 6 ihany no afaka maharitra mandritra ny vanim-potoana iray ary nanomboka teo dia nampiasaiko ho mpizara fotsiny aho, izay tiako izany ary manohy mampiasa azy io ho toy ny mpizara fitsapana.
Raha ny marina, izay maniry an'i Debian eo amin'ny birao, sintomy i Ubuntu. Izany no nataoko.
Valiny tamin'i Eduardo Medina
Na raha mitafy atody izy, dia apetrany i Debian Jessie ary ampanjifaina araka izay itiavan'ny olona azy (sao leo an'i Ubuntu izy ireo, sao sanatria).
Heveriko fa safidy hafa dia Tanglu, na SolydKX.
eto dia manjary misavoritaka ny zavatra arak'ity lahatsoratra ity fa ny blockports dia sampan'ny debian ary tsy haiko raha hihomehy na hitomany i debian dia manana sampana efa miorina, miorim-paka, fitsapana, sidina ary andrana.
Nanandrana azy rehetra aho mba hahafahako miteny tsara satria maro no miteny amin'ny fitsapana azy ireo mandritra ny iray volana fotsiny, amin'izao fotoana izao dia mampiasa sid aho ary tsy olana ny tena marina fa ny mampisafotofoto eto dia ny debian marin-toerana ampiasaina amin'ny fampiasana an-trano ary izany mahita lesoka ve aho satria ny debian stable dia ho an'ny mpizara ho an'ny mpampiasa birao mahazatra dia hitako ny dikany, ny fitsapana dia ny zatra ny rafitra ary ny fiankinan-doha aorian'ny fampiasana azy dia mampiasa ny rafitra amin'ny fitsapana dia ampitaina amin'ny sisiny ary tonga any amin'ny rafitra nohavaozina tsara ianao ary na dia ilay sampana tsy marin-toetra aza izy io ary tsy nanana olana tamin'ny taona lasa aho ary nampiasa azy io dia nohavaoziko ny rindranoko ary voavaha ireo fiankinan-doha taorian'ny andro tsy nisy zava-dratsy na aretin'andoha.
Raha miteny dia mila mampiasa ianao, mianatra ary manaova fotoana tsara amin'ny fiainana amin'ny fampiasana ny rafitra ary avy eo manome hevitra satria raha miteny amiko izy ireo fa mampiasa debian stable hampiasa azy io ho birao, tsy haiko na hihomehy na hitomany
Nitrox dia hoy izy:
Heveriko fa nanao fahadisoana ianao. Ny tranon'omby dia mety tsara amin'ny fampiasana ao an-trano, indrindra amin'ny milina taloha. Raha ny tena izy, amin'ireny tranga ireny dia tsara lavitra noho ny sampana hafa any Debian izy io.
Tsy misy na inona na inona, (fandefasana lahatsoratra, gimp, fandefasan-kafatra sns sns), izay tsy azoko atao amin'ny stable, miaraka amin'ny tombony fa tena vatolampy ilay rafitra, (tsy vaky na tsy tadiaviny).
Ho antitra ireo rindranasa, saingy tsy ny rehetra no maniry sy mila manavao hatrany ny daty, ary tsy mijaly amin'ny versionitis koa izy ireo
Valio amin'i Nitrux
Raha naneho hevitra tao amin'ilay lahatsoratra aho dia nanandrana nanandrana ary tsy mandeha ilay karatra tsy misy tariby.
Miala tsiny aho milaza an'io, saingy sarotra be amiko ny mieritreritra GNU / Linux manome olana 0 araka ny hamafisan'ny maro aminareo. Amin'ireo izay efa nanandramako, CentOS raha tsy mametraka fonosana ivelany ianao, ary voafetra be izany. Debian Sid fa tsy olana? Sarotra inoana, marina. Mampiasa Debian stable aho satria manome ahy ny olana kely indrindra, ary hitanao fa mbola manana azy ireo aho ankehitriny, na misy na tsy misy seranam-piaramanidina ...
Novakiako ny fanehoan-kevitra ary ny ankamaroan'izy ireo dia miresaka momba ny kinova debian azo antoka fa heveriko fa diso ny fampiasan'izy ireo ny debian raha manana pc an-trano izy ireo ka inona no tadiavin'izy ireo debian milamina Manontany tena aho, heveriko fa tsy manana traikefa bebe kokoa amin'ny debian izy ireo ary mandeha mitsapa sy manandrana
Mikorontana miaraka amin'ny blackport sy ny repositories ary ny kinova fampiharana, mampiasa iceweasel aho ary tena mety amiko izany miaraka amin'ny reposin'ny ekipa mozilla, mampiasa vlc aho ary tsy manana olana amin'ny fiankinan-doha. Nohavaozina sy mandeha tsara ny rindranasa ary ny boka izay nipoitra dia avy amin'ny kde indrindra. izay ny biraoko dia manizingizina aho fa diso ny fampiasan'ny namana ary manome ny heviny nefa tsy tena mahalala debian
Misy distro hafa izay havaozina amin'ny kinova beta farany saingy tsy marin-toerana izy ireo ary tena mampiseho ny tsy fandriam-pahalemana ho toy ny andohalambo izay imbetsaka dia ho hitan'izy ireo fa tsy maintsy apetrak'izy ireo indray ny zava-drehetra aorian'ny fanavaozana sasany farafaharatsiny amin'ny debian izay mbola tsy nitranga mihitsy izaho sy izaho dia nanavao ny fangatahako ary mitovy amin'ny firefox sy thunderbird hanome ohatra
Manoro hevitra anao aho hampiasa, hianatra, hamantatra ary indrindra ny zavatra niainana tamin'ny fampiasana fotoana mety fa tsy ilay kinova miorina xD ary avy eo omeo ny hevitrao ary lazao fa olana i debian
Araka ny nolazain'i morpheo etsy ambony, ny debian dia natao hampiasaina amin'ny mpizara sy amin'ny ankamaroan'ny toeram-piasana fa tsy ho an'ny PC desktop, eny fa na dia ny sampana fitiliana aza satria na dia vao haingana kokoa noho ny marin-toerana aza izy io, dia afaka manome olana amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanavaozana, indrindra rehefa mivoaka ny fitsapana vaovao.
Amiko ny fahamarinana dia efa mandreraka ahy ny horonan-tsarimihetsika fanaovana azy rehetra ho Arch, ankoatr'izay tsy ny fametrahana ny rafitra fototra, ny birao ihany, fa zavatra maro kosa no tsy maintsy raisina toy ny fikirakirana fiarovana, amboary ny rafitra fitsitsiana angovo…, tsy lazaina intsony fa afaka mamela anao tsy manana rafitra farafaharatsiny fotoana fohy ny Arch. Tsy azoko loatra hoe ahoana ny olona mitsikera ny tsy fisian'ny fikojakojana ny debian ny fonosana sasany ary mampiasa Arch izay mametraka fonosana nefa tsy sarotra ny manandrana azy ireo izay matetika tsy mahomby.
Milamina sy tsy sarotsarotra amin'ny fisokafako aho.
Tsy toy ny OpenSUSE na Fedora, izay manana orinasa ao aorin'izy ireo, i Debian dia mpilatsaka an-tsitrapo, ary imbetsaka, ny modus operandi.
Maro amin'ireo hadisoana vitany rehefa nametraka an'i Debian Stable ho birao no miandry ny hampiasana azy toa ny OpenSUSE na Ubuntu, miaraka amin'ny valiny mahakivy. Na izany aza, misy ny olona maniry ny hanana OS tsy misy fanavaozana izay tena misy ifandraisany ary tsy manelingelina intsony, izay tsy voatery ho ireo izay mitantana mpizara (avy amin'izany no isian'ny ankamaroany), fa avy amin'ireo olona manaraka ny filozofia Raha mandeha io dia aza kitihina. Ny tranga iray amin'ireo dia an'ny mpanoratra saga malaza ankehitriny Hira eto an-tany sy ny afo Geroge RR Martin, izay nitazona ny PC taloha niaraka tamin'i DOS sy Wordstar 4.0 noho ny fanoratany ny bokiny, ary PC iray hafa "moderina" hafa hiditra amin'ny tambajotra sosialy ary hijery ny mailaka nataony.
Ho ahy manokana, notendreko ny Debian Stable ho an'ny netbook-ko, izay ampiasako amin'ny asa maika be ary manana ny vahaolana eo am-pelatanany, zavatra izay imbetsaka i Debian Stable no namonjy ny hoditro. Ary ny antony tsy maintsy hifindrako any amin'ny sampana Testing dia satria ny kinova LTS an'ny Ubuntu (14.04, mazava ho azy), dia voaporofo fa azo antoka sy marim-pototra, izay vokatry ny fitoniana tsara ahatongavany an'i Debian Jessie, izany hoe noho ny fahazoana mangatsiaka azy amin'ny Novambra amin'ity taona ity.
Amin'ny maha mpampiasa Linux mpankafy ahy fa tsy mpampiasa solosaina, misy dikany betsaka ny fandinihana ity manaraka ity: manana ny fitsapana ny Debian KDE sy Tanglu KDE napetraka ao amin'ny solosaiko aho. Ny tena izy dia nanana hadisoana hadalana vitsivitsy tao Debian aho, toy ny nianjeran'ilay masinina rehefa nanova ny fotoana, izay tsy mbola nananako tao Tanglú. Ka izany dia manaporofo ny zava-misy fa mety tsy manome fotoana azy ireo handrafitra fonosana ho an'ny mpampiasa birao ireo mpamorona Debian, fa ho an'ny mpizara. Mifanohitra amin'izany no izy, any Tanglú, raisin'izy ireo ny zavatra nataony tamin'ny Debian ary nolobainy tamin'ny fombany manokana. Tsy lazaina intsony ny fihoaram-pefy amin'ny fitazonana ny maritrano marobe ao Debian.
Nieritreritra ny hitady distro hafa aho, saingy heveriko fa tsy maintsy mijanona mahatoky amin'i Debian aho satria ny fokonolona no manao izany ary raha misy ny bibikely, lazao izy ireo farafaharatsiny.
Miombon-kevitra aminao aho momba ny be loatra amin'ny maritrano. Raha ny hevitro, telo dia ho ampy ho an'i Debian ... Mandehana manomboka amin'ny i386 ka hatramin'ny i686, s390x, ppc64, x86_64. Ny sasany kosa tena be loatra.
Fa maninona no be pitsiny, ahoana raha tokony izy ireo, ahoana raha andohalambo, ahoana raha BSD, ahoana raha HURD, aza manodinkodina ny olona manao hadalana nomerika be dia be, ny tsotra dia maniry zavatra tsotra !!:
Xerix dia hoy izy:
Tsara, mpampiasa FreeBSD 😀
Mamaly an'i Xerix
azazelpy dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa tsy misy na inona na inona atoro an'i debian amin'izao fotoana izao, heveriko fa ny distro manerantany dia nidina an-dohan'izy ireo, mampiasa manjaro linux aho izao, avy any debian ary tena mieritreritra aho fa tsy hiverina intsony, ny fikirakirana ny fitaovana izay nitarin'i manjaro dia nahavaha ny rehetra olana nananako tamin'ny kahie, indrindra ny olan'ny bateria sy ny optimus nvidia.
PC-BSD dia manohana ny nvidia / optimus, tamin'ny fotoana farany nanandramako azy tamin'ny kinova 9 dia niasa tsara izany.
Valio i azazelpy
Ho ahy ny famaritana ny stable dia: solosaina no apetraka, voalamina ary havaozina rehefa angatahiny izy ary miasa isaky ny ilaina izany.
Amin'izany famaritana izany dia matanjaka i Debian. Solosaina iray no mihazakazaka Debian Squeeze mandritra ny 4 taona ary tsy misy olana, ampiasain'ny olona manana fahalalana ampy ho an'ny suite biraon'ny birao, fizahana, mozika sy fitehirizana ary tsy misy fitarainana.
OpenBSD ve izany? 😀
Tena Debmer dia distro lehibe fa manana olana ihany koa amin'ny tranga rehetra mba tsy hanana olana be dia be, tsara kokoa ny mampiasa ny kinova miorina amin'ny anjarako amin'izao fotoana ijanonako miaraka amin'ny Tiny Core Linux my izao. goavambe kely kely ^ _ ^
Ny famakiana ireo fanehoan-kevitra zato sy maro ireo dia tsapako fa amin'ny lafiny ankapobeny, maro amintsika izay mpampiasa Debian no nahatsapa ho diso fanantenana kely tamin'ny fanovana, ary sahiko ny milaza fa tsy niraharaha izay zavatra nahasarika indrindra an'i Lucas Nussbaum sy ny ekipany. ity distro: ny fahamarinan-toerana ary ny fahatokisana tanteraka fa hiasa tsara ny zava-drehetra. Tsy haiko raha ny hijanona eo aloha dia ny tanjony fa tsy noho ny fitoniany fotsiny, fa noho ny hafainganan'ny fanavaozam-baovao (efa eo amin'ny 7.6 !!! isika) na mifaninana amin'i Ubuntu, OpenSUSE ary na inona na inona ho an'ny zava-baovao. fa ny azo antoka dia ny fahaverezany kely amin'ireo mpampiasa birao mahatoky (ao anatin'izany ny tenako). Manantena aho fa tsy hitranga izany amin'ireo mpampiasa mampiasa azy amin'ny mpizara. Manantena aho fa tsy izany, ary na avy any ivelany aza dia mitomany am-pitomaniana aho: Ho ela velona anie ny mpanjaka Debian !!!
Manolo-kevitra ny hanoratra fanazavana amin'i Debian momba ireo olana ireo amin'ny maha mpampiasa anay izahay. Samy manana ny filany rehetra isika ary mila fitoniana ho an'ireo tetik'asa manokana, manana tombontsoa ary rafitra iray maimaim-poana toa an'i Debian no tia antsika hanatanteraka azy ireo.
Andao hatsahatra ny taraina ary hanampy amin'ny famahana ny olana araka izay tratrantsika isika.
Betsaka no mandao ny tetik'asa, jereo ity vaovao ity izay anateran'ny Spotify ny ekipany 500 miaraka amin'i Debian mankany Ubuntu ho fanohanana lava sy olana hafa:
Raha tadiavintsika ny hitohizan'ny rafitra ankafizintsika dia andao isika hanampy azy ireo handamina vahaolana mahomby.
Manana vahaolana tsara kokoa toa ny CentOS na FreeBSD isika, saingy avelao ho very izay mamaritra ny Debian; ny asany matanjaka hampiroborobo ny rindrambaiko maimaimpoana sy ny fampandrosoana ny fiaraha-monina.
Miara-manolotra ny vahaolana amin'ny tetik'asa izahay mba hanitsiana ny voina ao amin'ny fikambanana misy anao.
Tsy maintsy manao zavatra isika.
Amin'ny maha mpanoratra an'ity lahatsoratra ity ahy dia hanatevin-daharana izay fandraisana andraikitra ho an'ny Debian tsara kokoa aho, na amin'ny alàlan'ny fanoratana izay tohanan'ny mpampiasa Debian maro na amin'ny fomba hafa azonao eritreretina. Tena tsara izany raha toa ianao ka nanomboka ny fandraisana andraikitra toa izany.
Tsy mahita fomba fanampiana hafa aho; Araka ny efa nolazaiko dia efa nitatitra bug aho ary tena tsy nisy olona avy any Debian no namaly azy ireo, 🙁.
Mahatsiaro ahy ny hanao lisitr'ireo olana asehon'i Debian am-pahamendrehana. Avy eo dia tanteraho ny fanangonana sonia ary asehoy amin'ny ekipa na ekipa mifanaraka aminy mba hahitana vahaolana.
Manolotra ihany koa vahaolana tena izy amin'ny olana mba hahatonga ny feon'ny mpampiasa hanatrika.
Mampiasa debian sid aho nanomboka tamin'ny 1 taona lasa ary nisy bibikely kely tampoka saingy tsy nisy nahatonga ahy namerina nametraka ny rafitra feno toy ny mitranga matetika amin'ny arofony vaovao miaraka amin'ny fonosana vaovao.
Mazava ho azy fa tsy mifantoka amin'ireo mpampiasa birao i dabien fa tsy ny fifantohana dia ny mpizara fa ny debian sid ho an'ny birao ho ahy kosa tsara dia tsara no ampiasaiko isan'andro ary ny fanampiana izay lazain'ny maro dia ho an'ireo karatra horonantsary, mampiasa intel sy tsy misy olana ka tsy afaka miresaka bebe kokoa momba ny fanohanana aho satria tsy mila bebe kokoa dia apetrako sy milamina daholo ny zava-drehetra ka tsy azoko ireo miresaka olana hatramin'ny nampiasako azy nandritra ny herintaona mahery ary mbola tsy nomeny ahy mihitsy izay olana amin'ity rafitra ity dia tiako ny manova azy ho ahy, ny debian dia tsy mila bebe kokoa dia tsy mila fanohanana bebe kokoa ary tsy manelingelina ny fiankinan-doha satria efa fantatro ny fomba hamahana azy ireo
ny tsirairay dia mijanona amin'izay tiany ary izay tsy manome olana firy amin'izy ireo, mijanona amin'ny arofanina ary ny vaovao sy ny tsy fandriam-pahalemana, handray an'i debian miaraka amin'ilay vaovao aho nefa tsy dia maitso loatra.
Dariem dia hoy izy:
Tsy misy olona voatery hampiasa backports, fanampiana fotsiny izany raha tsy te-hanavao ny endrika maoderina amin'ny fizarana ianao ary te hampiasa kinova vaovao an'ny rindrambaiko sasany. Heveriko fa tsy mitombina loatra ny fitarainana momba izany. Te hanana fitoniana sy filaminana ve ianao? Mijanona ao amin'ny tranon'alanana ary aza mampiasa seranam-piaramanidina. Mila vaovao ve ianao? Mampiasà fanandramana na tsy milamina.
Valiny tamin'i Dariem
Io no tsy azon'izy ireo fa samy adala amin'ny foto-kevitr'izy ireo ny mitsikera os matanjaka sy matanjaka ary tsy mitsikera ny tsy fandriam-pahalemana izy ireo fa ho toy izao ny fiainana xD debian manana ny tsirony rehetra resaka ny fiezahana hampiasa ary avy eo manome hevitra miaraka amin'ny test de stable fotsiny dia tsy afaka maneho hevitra
Salama Alex, marina ny anao, nanandrana nametraka andohalambo aho ary tsy tratrako tamin'ny farany dia nilaza tamiko izy fa mametraka debian indray ary ekeko araka izay itiavako azy 🙂 na dia nanandrana nametraka gentoo tao amin'ny VM aza aho saingy tsia manohana azy kokoa: s
Avelako ho anao ny mailako raha sanatria te hanampy ahy ianao jesus.davidr80@gmail.com
Tigreci dia hoy izy:
Azoko ekena ny zavatra sasany, tsy maintsy lazaina fa ny teknolojia nvidia optimus dia vaovao ary tsy tohanana raha tsy ny kinova debiana an'i jessie, vao hanomboka fotsiny izany, avy eo ny olana fitsapana, tsy nahatratra ny haavon'ny ubuntu izay namoaka isika kinova azo antoka, ohatra, rindranasa iray izay tokony hijerena fahitalavitra sy hifanaraka amin'ireo fantsom-pahalalana izay ananako ny bug izay tsy vita, sa vao tena nanomboka? Namoaka programa tsy miovaova izy ireo, ka rehefa gaga ianao amin'ny ops tampoka, tsy ampiharina? ny tena anjara asan'ny programa tsy ampiharina? manao vazivazy ve isika? Tokony ho tamin'ny andron'ny Ubuntu 7.10 ary mbola manana izany tsiro ratsy izany eo am-bavako aho, ankoatr'izay misy zavatra hafa mitranga, rehefa miteny ianao hoe maritrano 11 ary tsy fantatro hoe firy ny sampana, tsy misy lehilahy 4 no mampivelatra azy, izy dia vondrom-piarahamonina iray misy an'arivony ny programmer, misy manodidina ny 20 heny ny mpamorona eto amin'ny tontolon'ny GNU / Linux noho ny amin'ny rafitra miasa hafa, mihevitra ihany koa fa tsy mitovy, ny lozisialy sy ny kaody loharano eo anelanelan'ny fizarana samy hafa dia mitovy, ny hany zavatra misy dia ny mpikirakira ny fonosana, raisin'izy ireo ny kaody loharano, ampangarohariny, andrana, misy bibikely, atoro azy ireo amin'ny mpamorona, miasa izy, nofonosiny ary napetrany tamin'ny andrana izy ireo ahitsio izy ary ampitainy amin'ny sisiny, avy eo dia manitsy ny lesoka izy ireo ary mampiorina azy io ary mamindra azy io amin'ny fitsapana raha mbola eo am-pitsapana izany, mety hiseho ireo bibikely kely, voahitsy izy ireo ary nakarina avy amin'ny fanakorontanana, bibikely tsy dia matotra loatra izay anisany koa miakara avy amin'ny subversion sy bibikely matotra izay nesorina ilay fonosana ary naverina amin'ny sisiny na tsotra Tsy mahita bibikely izy ireo, izay hitazomana ny kinova miorina amin'ny ho any stable fa tsy midika izany fa ny kinova vaovao an'ity rindrambaiko ity dia tsy hivoaka mandritra ny vanim-potoana izay anaovany hatsiaka dia misy fotoana izay misy fonosana vaovao manomboka Tsy ekena ny fanandramana ary manomboka miorina sy manitsy ny lesoka fanandramana, raha toa ka tena matotra ireo hadisoana ireo dia tapaka fa hesorina ny fonosana raha toa ka manakiana na tsia fa raha vao milamina sy mihamangatsiaka izy ireo dia mivoaka ilay kinova vaovao. , valizy efa antitra sy hafa no hany ataon'izy ireo dia ny fanitsiana ireo tranga.
Zavatra iray hafa, malalaka ny rehetra manampy ny repositories tadiaviny, ny hany zavatra omeko anao ny antony dia tokony aseho amin'ny fametrahana na manome safidy ny hanampy ny backdports na tsia ary tsy hampihetsika azy ireo amin'ny toerana misy anao, satria noho io fitsipiky ny telo io dia tiako kokoa ny manampy ireo haino aman-jery debian amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina, raha tsy izany dia niasa tsy nisy olana tamin'i Jessie, ny kernel amin'izao fotoana izao dia manome olana maro, ohatra, nampidina ny hafainganan'ny tambajotra. wifi sy tariby ary tsy olana amin'ny router-ny izany, nanana fanavaozana kernel sy fonosana hafa aho ary nanomboka teo dia tsy nety izany, talohan'ny nisintomako tamin'ny 1000 Kilobytes isan-tsegondra ary ankehitriny teo amin'ny 35-50 Kilobytes dia ratsy izahay, ary tsy matetika fa ny ankamaroan'izy ireo Ny fotoana, ohatra, miadana ny fampidinana ireo repositories fa avy amin'ny google chrome na chromium dia mandeha haingana izy io na dia mihisatra aza indraindray ny fandefasana azy, ary azoko antoka fa noho ny zavatra efa nisy io nokasihina tao anaty kernel, na tany amin'ny tranomboky sasany Fa satria raha mi-boot miaraka amin'ny kernel teo aloha aho dia tsy mamaha izany.
Tsy fanboy aho raha ny marina tamin'ny voalohany nampiasa debian ary nankahala azy tamin'ny heriko manontolo, ny kinova 2.0 dia namafa ny zava-drehetra, fa ny zava-drehetra, rehefa nanao ny fizarazarana mandeha ho azy, dia nanome hadisoana ary namela ny latabatra fizarazarana (tamin'izany fotoana izany tsy nisy fitaovana tsara toy ny ankehitriny hanarenana angona)
Saingy izao raha miaro azy aho noho ny antony maha-mpamorona ahy ary na toy inona na toy inona tianao irina zavatra, dia hisy foana ny lesoka, satria lehibe ny tontolo iainana ary ny fahatsiarovana roa mitovy amin'ilay maodely sy mpanamboatra dia tsy mila miasa 100% mitovy.
Izaho dia manana mpiara-miasa manana fitaovana mitovy amiko, maodely ary ny zava-drehetra ary tsy nitantana tamin'ny fomba hafa rehetra izy mba hahatonga ny nvidia optimus hiasa na dia taorian'ny fametrahana maromaro aza ary nofafako mihitsy aza i debian jessie vao napetraka ary nanao fametrahana mitovy izahay dia nanao zavatra mitovy tanteraka sahady. tsy natombok'izy ireo ilay xserver ary izaho no nanao
Izay no antony ilazako hoe tsy misy dikany ny fitsikerana noho ny fitsikerana, toy ny any amin'ireo repositories any an-dafin-tany sy ny stews hafa, samy mandeha any amin'ny trano fisakafoanana tadiaviny ny tsirairay fa marina fa tokony hanome anao ny menio hisafidianana izy ireo.
Mamaly an'i Tigreci
Navoaka ny LibreSSL Portable